Kuvonekwa kwaKristu HAKUSI Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Kuvonekwa kwaKristu HAKUSI Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10
Kuvonekwa kwaKristu HAKUSI Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10
Kuvonekwa kwaKristu kunorevei?
Tinofanira kugadzirira kuuya kwechipiri kwaJesu nekugona kumuvona achiratidzwa muShoko rake, tisati tamuona iye seShoko.
Kuvonekwa kune dudziro nhatu dzakasiyana muBhaibheri.
Chiratidzo cheMwanakomana weMunhu chakavonekwa makiromita makumi mana nematatu mudenga segore guru musi wa 28 Kukadzi 1963 muArizona. Rakatorwa mifananidzo riri pamusoro pemakomo eSunset ari munyika dzerenje. Gore iri haringave Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chaputa 10 sezvo risina kubvira rauya panyika asi rakaramba riri pachinhambwe ichocho. Hama Branham vaive mamaira 200 kubva panzimbo iyi kuchamhembe kuTucson, saka paive pasina munhu pasi pegore kuti riburuke kwaari.
Bhaibheri rinodaidza zvakare Kuuya kwechipiri kwaJesu kuti kuvonekwa kwaJesu panova nekutongwa kwemubairo apo St Pauro neMwenga umwe neumwe vanogamuchira korona.
II TIMOTIO 4:1 Ndinokupupurirai kwazvo naizvozvo pamberi paMwari naShe Jesu Kristu, Iye uchatonga vapenyu navakafa pakuvonekwa kwake novushe bwake.
II TIMOTIO 4:8 Kubva zvino ndakachengeterwa korona yokururama, yandichapiwa naShe Mutongi wakarurama nezuva irero; ndisini ndoga, asi navose vanoda kuvonekwa kwake.
Mwari akazviratidza kuna Abrahama akataura nenzwi remunhu, achitaura mifungo yaSara mwana wechivimbiso Isaka asati auya.
Mugore 1946 Mutumwa akauya kuna Williama Branham zvakaita kuti atange hushumiri hunoshamisa hwakamutsiridza kuita kwePentecosti. Kumwe kuita kunoshamisa kwehushumiri uhu raive simba guru raMwari rekushandisa izwi rehama Branham apo Mwari, aive asingaonekwe ari padyo nehama Branham, akataura mifungo yevanhu kubva muna 1946-1965. Mufananidzo wakatorwa kuHouston muna Ndira 1950 wairatidza Mwari achionekwa seShongwe yoMoto pamusoro pemusoro waWilliam Branham. Izvi zvinoratidza kuti kuzara kwovuMwari kwaive pedyo naye, kwete maari.
1964-0618 HUVEPO HWAMWARI HUSINA KUVONEKWA
Ndakamira muSouth Africa, kwandaive nemazana maviri ezviuru zvevanhu paDurban race track, pavakaona nguva imwe yakaitika seizvi, mumashure mekutsanangura kwavari, mukuita kuri nyore; vakaona chinhu chimwechete chichiitika, pane zvakaratidzwa, vanhu zviuru makumi maviri nemashanu vakaporeswa pakarepo. Vakatora marori manomwe akazara, akareba kubva pano, ane mavhiri matanhatu mamwe masere saizvozvo, vakamazadza nemadondoro nezvimwe zvinhu. VaHedheni, vaisaziva kuti rudyi nderupi kubva kuruboshwe.
Zuva rakatevera VaSidney Smith, meya weguta reDurban, vakandifonera vakati, “Enda pafafitera rako, kurutivi rwakadziva kugungwa reIndian, uchaona chinhu chausati waona.” kwaive nemapurisa achiuya nemarori manomwe akatakura, nemazana evanhu vachifamba kumashure kwawo, pazuva raive radarika vaive pamawiricheya panhowo dzehurwere nezvose zvavaive nazvo, vachiimba, “Nekutenda chete, Zvinhu zvose zvinogoneka.” svondo raive radarika, ipapo, vairwa umwe neumwe, vachirwisana. Asi tarirai avo vaifamba, vari pamwechete, vakabatana maoko.
Nei? Vakanga vaziva kuti Mwari weDenga azviratidza kwavari kupfurikidza neShoko rake.
Musangano uyu paDurban racetrack wakaitwa muna 1951. saka Mwari akaonekwa pakati pevanhu vake muna 1951. kubva muna 1946 pakauya vatumwa kune hama Branham, Mwari akanga achionekwa pakati pevanhu vake.
Mwari haana kutanga kuzviratidza kuvanhu segore raive pamusoro pemakomo eSunset musi wa 28 Kukadzi 1963. Gore iroro raive mudenga denga, pamakiromita 43, kuti rive pakati pevanhu. Hakuna izwi remunhu rakataura pachiitiko ichi.William Branham aive asipo sezvo aive achiri kuTucson, achigadzirira kuenda kuHouston kwaakanoparidza musi wa 4 Kurume 1963.
Kune zvinhu zvitatu zviri kurasisa vatendi veMharidzo “Massage” zvakanyanya.
Vanofunga kuti gore remuna 1963 raive Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa 10. Izvi hazvisizvo.
Vanofunga kuti Jesu Kristu akaonekwa munzvimbo dzerenje dzemakomo eSunset segore. Izvi hazvisizvo nekuti haasi kuzoonekwa murenje. Gore raive chinhambwe chemakiromita 200 kuchamhembe kwemakomo eSunset uye rakaonekwa mazuva matanhatu hama Branham vasati vasvikako.
MATEO 24:26 Zvino kana vakati kwamuri, tarirai uri kurenje, regai kubuda. Tarirai uri mudzimba dzomukati, regai kutenda.
Chechitatu, vatendi veMharidzo vanofunga kuti mazwi akabatwa paitaura hama Branham ndiwo makuru. Vanofunga kuti chokwadi chinotaurwa nekubatanidza mazwi akataurwa nehama Branham. Izvi hazvisizvoba.
Ndiyo nzira yazviri muhupenyu hwechiKristu. Pane nzvimbo yekumirira, uye kune nzvimbo yekuenda. Shoko raMwari ndiro Mukuru.
Munokwanisa chete kutsigira dzidziso kana mukatora zvakataurwa nehama Branham mobatanidza Magwaro akawanda kuti mutsigire dzidziso yazvo. Ipapo munokwanisa kutenda mazviri nekuti Bhaibheri rakareva kudaro, kwete nekuti hama Branham vakadaro.
Ngatitangei kuburitsa pachena kuti Gore rakaonekwa harisi Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa 10.
Gore guru rakaonekwa musi wa 28 Kukadzi 1963 rakakonzeresa kukakavara kukuru muvanhu vanotenda kuMharidzo. Izvi hazvishamisi sezvo hama Branham vaive vasipo, havana kuona gore iri, kwatodarika mwedzi yakati kuti pavakaratidzwa mifananidzo yegore, akataura zuva raive risiri rechokwadi saka akabva apendera nyaya iyi zvisiriizvo. Kukanganisa uku kwakazosimbiswa naBilly Paul Branham apo bhuku rinonzi “Revelation of the Seven Seals” rakashambadzwa muna 1967 rikazopurindwa muna 1993. Anoti vatumwa vanomwe vakabva kune hama Branham vakanoita gore iri. Asi vatumwa vakamusiya pamusoro pegomo reSunset mangwanani emusi wa 8 Kurume uye gore raive raonekwa musi wa 28 Kukadzi paFlagstaff makiromita anoda kukwana 350 kuchamhembe kwemakomo eSunset. Isu maKristu tinokwanisa kubatira Mwari nesimba redu pachedu sezvo tinenge tati tiri kuda kubatira Mwari. Asi dzimwe nguva kubata kwedu kunenge kusiri muhurongwa hwake.
Kutaura kuti “Izwi remutumwa wechinomwe” ndiro “Izwi raMwari” hazvina kuchenjera nekuti zvinototirasisa zvakanyanya. Mwari haakanganisi. Hama Branham munhu wenyama saka vaikanganisa dzimwe nguva.
Musi wa 28 Kukadzi 1963, vatumwa vanomwe vakaita gore iri zvinoshamisa kwazvo sechiratidzo kudenga. Raive mudenga kwazvo kuti titi raive raitwa nemvura inopwa ichikwira kudenga sezvo 99% yemvura inopwira iri pasi pechinhambwe chemakiromita makumi maviri. Hama Branham vaive vasipo pasi pegore iri sezvo nguva yekuvhima yaizotanga zuva raitevera musi wa 1 Kurume 1963. Dai aive achivhima musi wa 28 Kukadzi kwaive kutyora mutemo. Akaparidza zvakare kuHouston musi wa 4 Kurume asati asimuka kuenda kunovhima. Tichiwedzera, musi wa 28 Kukadzi roketi reThor rine simba kwazvo raive raputika maawa mana izvi zvisati zvaonekwa, kunhivi dzeCalifornia, richibva paPoint Mugu, raive miziri rekudzidza naro raiitwa muchivande pabhesi reVandenberg Air Force. Chiutsi charo nezvakasara zvakaitawo rimwe gore pachinhambwe chimwechete chemakiromita 43. vanotenda kuMharidzo “Massage” havakoshese kuti kwakava nerimwe gore zuva rimwechete iri.
Vhiki rimwechete mumashure meizvi vatumwa vanomwe vakazviratidza kuhama Branham, pavaivhima mugomo reSunset, nguva yekuvhima isati yavharwa musi wa 10 Kurume. Vakauya kwaari vasingaonekwe vakamupa basa rekuzivisa Zvisimbiso Zvinomwe. Vakabva vaenda vasingaonekwe uye havana kuita gore vachibva kwaari. Hakuna gore rakaitwa kana rakatorwa mifananidzo pazuva ravakashanyirwa nevatumwa vanomwe. Hama Branham hapana chavaiziva pamusoro pegore kusvikira pavakariona pakavha rekuseri kwemagazini reLife musi wa 17 Bambwe 1963, mwedzi inokwana kuda kuita mitatu yatodarika.
Zvino kukanganisa mune zvaitaurwa kwakaitika. Vakafungidzira kuti vatumwa vanomwe vakaita gore pavakabva kwavari. Uku kwaive kukanganisa kwemunhu pakufunga pazvinhu zvaive zvaitika. Kukanganisa uku kwakadzokororwa nevanhu vakashambadza bhuku rekutanga Seven Seals muna 1967. Ipapo Billy Paul Branham akanyora pakumhoresa kuti vatumwa vanomwe vakauya kune hama Branham musi wa 28 Kukadzi 1963 - pane izvi zvinoreva kuti aivhima zvisiri pamutemo.
Billy Paul akataurawo zvakare kuti mufananidzo wegore, uchiratidzwa mubhuku Seven Seals, ndizvo zvairehwa nehama Branham mukati mebhuku. Manyepo. Hama Branham pavakaparidza Zvisimbiso Zvinomwe hapana chavaiziva pamusoro pemufananidzo wegore, uye havana kutaura nezvawo zvachose. Bhuku iri rakazopurindwa zvakare muna 1993 richitaura kuti vatumwa vanomwe vakaita gore pavaibva pane hama Branham. Kunyepa. Vatumwa vanomwe vakaita gore mazuva masere vasati vazviratidza kuhama Branham. Chiporofita chaive chamboitwa chekuputika uye kuuya kwevatumwa vanomwe kwaari chaive chazadziswa, KWETE musi wa 28 Kukadzi 1963 asi mazuva angangosvika vhiki akazotevera. Chiporofita ichi hachina kubvira chasanganisa gore.
Hapana aitarisa zvakakosha apa. Saka gore, kubva pakutanga rakabva rava kutanga kwekukanganisa kukuru, izvi zvakakurudzira fungidziro zhinji. Kuneta kukuru kuri pavanhu vanotenda “Mharidzo” isimba ravo rekushanda nemazwi akataurwa vasingatarisi zvakakosha kana Magwaro. Kutenda kuti mazwi akataurwa nehama Branham haakanganisi, zvinomuita kuti ave Pope wechipiri. Zvichida munguva yedu isingapisi kana kutonhora yeRaodikia tine nungo zvedu dzekutsvaga chokwadi.
Saka fungidziro dzakabva dzatanga.
Vakawanda vanotaura nezvegore guru iri sekuuya kwaJesu Kristu kwechipiri. Muna 1969 kereke yemasangano yakanyora neruvara ruchena parutivi rwenzvimbo inorasirwa marara nemugodhi kuSouth Africa kuti “JESU ARI KUUYA”. Izvi zvakashandurwa pakanyorwa kuti “JESU AKAUYA” zvakanyorwa nevanhu vanozviti vanotenda kuMharidzo. Vakabva vasimbisa kutadza uku nekurega kuita Chirairo nekuti Jesu akati tinofanira kuchiita kusvikira adzoka, saka maererano nezvavanofunga akatouya. Vanhu vakamanikidzwa kusiya mabasa avo, nekuti vaparidzi ava vaiti kukwira kudenga kuchaitika muna Kukadzi 1970. Moto unoenderera munezvechitendero uri nyore kubatidzwa negwenya risiriiro, asi semimwe moto yese hausi nyore kudzima. Saka mumashure mechiitiko chemuna 1970, kuuya kwaMwari kwakanzi kuri muna 1977 zvichitevera mazwi akasarudzika aive abatwa pakutaura, akaita seekuti
Nguva yekereke yeRaodikia
Kereke yeRaodikia yakatanga makore akapoteredza kutanga kwesenturi yechimakumi maviri, zvichida kunana 1906. ichatora nguva yakareba sei iripo? Semuranda waMwari aive asangana nezviratidzo zvakawandisa, pazviri HAKUNA chaive chamboita chenhema, regai ndifungidzire zvinhu zviri mberi (handina kuti kuporofita, ndati kufungidzira) kuti nguva ino ingangopera munana 1977.
1977 yaive isiri fungidziro yakanaka zvachose. Fungidziro dzevanhu dzakafa. Nekuzvibatanidza kwavo kwavanoita nemazwi akataurwa, vanotenda kuMharidzo havana kuona chikonzero chekuti vatarise vachifananidza zvakataurwa zvakawanda pamusoro pa 1977 nezvinotaura Magwaro.
Asi kufunga kwevanhu kunotowana mukana chete. Gore, kana kwaive kusiri kuuya kwaMwari kwechipiri, zvino kunofanira kuva kuri kuuya kweMutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa chaputa 10, nekuti hama Branham, zvichienderana nekuturikira kwavanoita kumwe kutaura kwavakaita, vaifanira kuva vari panyika paizouya Mutumwa uyu pasi. Kwaive kusina Magwaro ekutsigira kutaura uku. Asi mazwi anotaurwa anoonekwa akakosha kukunda Magwaro muvatendi vazhinji veMharidzo.
Saka ngatitarisei chiitiko chikuru ichi kuna Zvakazarurwa chaputa 10 kuti tione kuti Bhaibheri rinotii.
ZVAKAZARURWA 10:1 Zvino ndakavona mumwe mutumwa unesimba achiburuka kubva kudenga, akapfeka gore; murarabungu wakanga uri pamusoro wake, chiso chake chakanga chakaita sezuva, netsoka dzake sembiru dzomoto.
2 Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruvoko rwake, akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa, norworuboshwe pamusoro penyika.
Neimwe nzira vanotenda kuMharidzo vakava nekufunga kuti ichokwadi kuti Zvakazarurwa 10:1-6 yakazadziswa negore guru rakatorwa mifananidzo muna 1963 pachinhambwe chemamaira 27 mudenga pamusoro peFlagstaff muArizona.
Ngatienzanisei gore nekuuya pasi kweMutumwa mukuru mumavhesi maviri ekutanga.
Asi pane zvishoma, kana zviripo, zvakafanana pakati pegore nemutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa chaputa 10.
Mufananidzo wekutanga uri pano kunyora kwekufungidzira kuri kuratidza zvingangodaro zvakaita Mutumwa mukuru akaonekwa naJohane kuna Zvakazarurwa chaputa 10. mufananidzo wekutanga unoratidza gore guru remuna 1963. Mufananidzo wechipiri unoratidza kuti kwaionekwa makore maviri. Vanotenda kuMharidzo havambotaure nezvegore rechipiri rinoonekwa nechepamusoro uye kurudyi kwedenga remba rakaita tiraiengo pakati pemufananidzo wechipiri.
Gore harina tsoka, saka hapana tsoka dzinotaridzika kunge sembiru dzomoto. Hapana mbiru dzemoto mbiri.
Musoro wakatarisa pasi sekunge munhu akarara akatambarara pasi. Munhu akamiririrwa nemusoro wegore haana kumira akati twii.
Hapana gungwa pamufananidzo. Nhivi dzeCalifonia dzaitozoonekwa mamaira aisvika 200 kure nepakatorwa mufananidzo. Munhu ari mudenga pachinhambwe chemamaira 27 haakwanisi kuti tsoka dzake dzitarangane zvemamaira 200.
Hapana bhuku rakavhurika pamufananidzo wegore. Hapatorina bhuku zvachose. Hapanawo ruoko rwekubatisa bhuku racho.
Hapana chiso chiri kunyatsoonekwa Mumufananidzo chaiwo wekutanga wegore guru, hapana chiso chakaita sezuva. Mufananidzo unoonekwa kumashure kwekavha remagazini reLife musi wa 17 Bambwe 1963. hapana chiso chaivepo pamufanaidzo wekutanga uyu- onai mufananidzo wechina une ruvara uri pasi. Pakaitwa yavanoti fotositati pakavha rekumashure kwemagazini reLife, mimvuri yakaonekwa mukati megore zvakaita kuti rionekwe sechiso chaKristu. Zvaive zvisingaiti kuti titi mupositora Johane akaona fotositati muchiratidzo chake. Asi chiso cheMutumwa mukuru chaive chakaita sezuva, saka kushandisa mimvuri kuratidza chiso hakushandi pachiratidzo ichi.
(Mufananidzo wechitatu uri pasi apa wakafanana nemufananidzo wechipiri wakamanipuretwa pakombiyuta ukafiripwa, ukashandurwa, ukatenderedzwa ukazoitwa kuti uve grayscale. Munokwanisa kufananidza mufananidzo wakamanipuretwa uyu nemufananidzo wekutanga wegore. Kana kuufananidza nemufananidzo wekutanga wepachinyorwa chemumagazini reLife une ruvara uri pasi pawo.) Tarirai pamufananidzo wekutanga une ruvara pane nyika. Vanhu vakawanda vakamanipureta (kutenderedza) mufananidzo wekutanga chaiwo kuitira kuti vamise musoro zvakanaka.
Ndapota musatambire mifananidzo yakatenderedzwa. Semifananidzo miviri inotevera:
Iyi inokwanisa kukuitai kuti munyengereke. Vanhu vakawanda muAfrica vakanyengerwa nemifananidzo yakatenderedzwa yegore yakadai.
Chiso chiri mugore chakatarisa pasi panyika. Parikuita sepane nguwani yemutongi mumusoro wake.
Murarabungu pamusoro pemusoro wake? Izvi hazvisi kubva pamufananidzo wegore wekutanga chaiwo wakatorwa pamusoro peFlagstaff naDhokotera James McDonald, vaiita nezvesainzi vaive panzvimbo.
“Akapfeka gore”. Gore raimiririra musoro chete. Hapana muviri saka hapana nguvo kunze kwenguwani yemutongi nebhanhire pachipfuva chake.
“Mutumwa mukuru anouya pasi”. Gore harina kubvira rauya pasi. Rakafamba richidarika kubva kumadokero kuenda kumabvazuva richiramba riri pachinhambwe chemamaira 27 (makiromita 43) pamusoro penyika nguva dzose. Mifananidzo 85 yakatorwa uye yese yaive iri pamusoro-soro mudenga.
Vatumwa vanomwe vakauya vasingaonekwe kuhama Branham paGomo reSunset. Chaakakanganisa kwaive kufungidzira kuti pavakabva kwaari ndipo pavakaita gore pavaienda kudenga. Aiziva kuti gore iri raive remweya rinoshamisa. Chaakakanganisa kwaive kupa zuva. Aive asipo pasi pegore. Chinhu chakakosha chatinofanira kutarisa. Vanotenda kuMharidzo vane chirwere. Vanoramba vakabatira pakukanganisa pekuti vatumwa vakabva kwaari vakaita gore. Hazvina kubvira zvaitika nenzira iyoyo, asi vanobatirira pamashoko akataurwa ekuti zvakaitika.
Munguva yekereke yeRaodikia tinoudzwa kuti tishingaire titendevuke kubva kuzvivi. Hatifanirwi kuramba takabatira pazviri. Hatiponeswe nekutenda kune zvakataurwa nehama Branham zvavakakanganisa zvakare. Tinofanira kumuteerera paakataura zvinhu zviri muMagwaro.
Vatumwa vanomwe havana kubvira vauya pasi pazuva rakaonekwa gore. Vakaramba vari mudenga denga. Zvisinei, kana vakaita gore pavakabva kwaari, zvinorevawo kuti gore rakatorwa mifananidzo apo vatumwa vanomwe vaienda, rutivi rwakasiyana nerweMutumwa mukuru. Pamusoro pazvo zvese, Johani akaona Mutumwa mukuru achiuya pasi kwete achienda.
Saka gore harizadzisi chimiro cheMutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa chaputa 10.
James McDonald, wezvesainzi akatora mufananidzo wegore, haana kukwanisa kutsanangura kuti chii chakaitika, nekuti pachinhambwe chikuru chakadai hapana mvura yakapwira kuti iite gore rakakura kudaro, raive rakada kuita makiromita 150 (mamaira 93) pakutenderera. Kukura kumwechete kwegore iri kwakakwezva vanhu kuti vaungane vatarise kusvikira patorwa mifananidzo 85 yakasiyana-siyana yegore iroro vakaiendesa kuna James McDonald.
Eyafosi ye United States yakanga yatanga kumuudza kuti hakuna roketi raive raputika zuva iroro. Saka akashamiswa.
Chiitiko chekuti kwakazoita makore maviri chakabva chatyora Dhokotera McDonald. Pave paya Eyafosi yakazobvuma kuti yaive yaputitsa Thor roketi muchinhambwe chemamaira 27 pamusoro penhivi dzeCalifonia, maawa anokwana kuita 4 asati vatora mifananidzo. Izvi zvinotsanangura chiutsi neguti rakaita gore rechipiri, pamufananidzo wadarika, raive riri pamamaira 20 kumashure kana kuti kumadokero kwegore chairo. Paive pasina tsananguro yakakwana yezvemamiriro ekunze pamusoro pegore guru, sezvo paive pangoitika kuputika kumwechete. Gore guru iri kana zvakadaro raifanira kuva rakabva kunzvimbo dzinoshamisa, rakaitwa nemapapiro evatumwa. Kuputika kwakaitwa nevanhu kwakaitika, uye segore rechiutsi rakaenda kuMabvazuva, zvino vatumwa vamomwe vakabva vaita gore rinoshamisa rakakura kukunda iri richienda nerutivi rumwechete urwu. Nenguva, chiutsi chegore rakaitwa nekuputika chakapararira. Gore rinoshamisa rakaramba richifanba, asi hapana chero nguva yakaonekwa rimwe regore richidzika pachinhambwe chemamaira 27 (makiromita 43) mudenga. Gore harina kubvira radzika pasi kuuya kumakomo eSunset, rakaramba richienda zvakadzikama riri mudenga pamusoro peFlagstaff rakatarisa kuNew Mexico.
JOERE 2:30 Ndicharatidza zvishamiso kudenga napanyika, zvinoti: Ropa nomoto neshongwe dzoutsi.
Gore rechipiri rakati dzimei pamufanaidzo rakaita maoko maviri anoonekwa aienda mudenga. Aya ndiwo atingati shongwe dzoutsi dzakaitwa nekuputika kweThor roketi raive rakagadzirwa rakasanganiswa mvura nemaoyiri. Kuva rakasanganiswa kudai kwakaita kuti kuputika kwacho kuve kwakakurisa kupinda zvazvaifanira kuita saka kwakava nechiutsi chakawandisa.
63-0707M Gwaro Remurairo
… “Zvichaitika, sezvakataurwa nemuporofita Joere, Joere 2:28. 'zvichaitika nemazuva ekupedzisira, ndizvo zvinotaura Jehova, Ndichadurura Mweya wangu pamusoro penyama yese.'”
Teererai kuchiporofita chiri apo. Mutarisei, haana kutya, akamira pamberi pevanhu, achivazvidza, achivaratidza. Achiti, “Aya ndiwo Magwaro! Izvi ndizvo zvakataurwa nemuporofita! Ndichadurura Mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaporofita. Pamusoro pavaranda napamusoro pevashandiri ndichadurura Mweya wangu; ndicharatidza zvishamiso kudenga napanyika, zvinoti; moto neshongwe dzoutsi.!” kuzvitsigira neShoko, kuti zvaive muShoko.
Moto wakabva pakuputika wakaita shongwe mbiri huru kwazvo dzeutsi dzakasimuka mumhepo dzichiita gore rechipiri riri kuonekwa pamufanaidzo saka zvakazadzisa chikamu ichi chekuporofita kwaJoere. Saka Mwari vaitiratidza zvishamiso mudenga.
65-0801E Zviitiko zvakajekeswa nechiporofita
Hama, uku ndiko kuzadziswa kwaMaraki 4 Ruka 17 Johane 15 oh akawandisa Magwaro acho Zvakazarurwa 10, zviporofita zvakawandisa zvinokwanisa kuyananiswa nezuva iri. Zvakare muBhuku raMako nekuna Mateo, paakati zviratidzo zvikuru izvi nezvishamiso zvichaonekwa mudenga, vanhu vachazviti masosi, masosi anobhururuka, anotsakatika nesimba nekukasika mukufunga, kungwara kunokwanisa kufamba mukati imomo. Anokwanisa kunyora, anokwanisa kutaura, anokwanisa kuita zvese zvaanoda. Shongwe huru yomoto, “Mumwechete zuro nhasi nekusingaperi.” Zviratidzo zvichavapo panyika, mapiramidhi echiutsi achikwira kudenga, pamusoro-soro pasina hunyoro pasina chiro mamaira makumi matatu mudenga. Zvakataurwa gore nehafu zvisati zvaitika, kuti zvichange zvakadaro. Zvino tendeudzai mufananidzo muone kuti Ndiyani wakatarisa pasi. (Gore guru rakaita kunge musoro waJesu).
Gore rechipiri raive chishamiso chekuita kwevanhu rakaitwa nechiutsi nekuda kwekuputika kwakaitika pachinhambwe chikuru ichi.
Gore guru harina kuitwa nemvura inopwira kana kwapisa kana kuti kuitwa nechiutsi raive gore rinoshamisa. Saka chinangwa chegore rinoshamisa iri ndechei raitaridzika semusoro waKristu akapfeka nguwani yemutongi? Raive pamwechete neshongwe (dzekuita kwevanhu) dzeutsi dzakataurwa naJoere, saka gore guru raive richifanirawo kuva chiratidzo kudenga. Tingawane here Magwaro pamusoro pechiratidzo chinoshamisa mudenga?
Mateo 24:30 Ipapo chiratidzo cheMwanakomana wemunhu chichaonekwa kudenga.
65-0718M Kuedza kubatira Mwari Husiri Hurongwa hwaMwari
Muchiitiko chikuru ichocho, kuti nyika inge isina, vachiri kushamisika kuti chii chakaitika. KuTucson, ivo vaive pachiitiko ichi vakatora mifananidzo yacho ipapo; vachiri nekushamisika kuti chii chaiitika. Kuti chaive chii? Vakazviisa mumapepanhau, “Kune munhu angazive here nezvazvo, kuti zvakaitika sei?” Hakuna guti kudenga uko, hakuna mhepo, hakuna hunyoro; mamaira makumi matatu mudenga. Maiwe zvangu!
“Kuchave nezviratidzo kumusoro kudenga. Kana zvinhu izvi zvoitika, kudengenyeka kwenyika, munzvimbo dzakasiyana siyana, zvino chiratidzo chichaonekwa mudenga, cheMwanakomana wemunhu.”
Ndiko Kubuda KweZuva
Asi simba raMwari rekukasika rakaita kuti nyika ipupure kwazviri, kuti iChokwadi. Mutumwa waMwari, zvandakakuudzai zvaive zvava pedyo, Shongwe yoMoto, simba rekukasika, regai nyika ipupure izvozvo kuti iChokwadi. Uye mazviri, havana kuziva kuti chaive chii, uye isu tinongotarira rutivi urwu ... uye ndiMwari wedu ari kumusoro uko. Mazviona? (achirevera kugore guru).
Ndiye anovhura zvisimbiso izvozvo; Ndiye zvisimbiso zvacho. Nekuti Shoko raMwari rese ndiye Kristu, uye Kristu ndiye chisimbiso chaive chakavhurika. Saka kuvhurwa kwezvisimbiso izvozvo ndicho chii? Kuzivisa Kristu. Uye vatumwa vanomwe vakamiririra Makereke Manomwe ese akapedziswa, uye hatingakwanise kuzviona. Vakatora mifananidzo, kwete isu. Uye uyo amire apo, Mutongi mukuru, achitiratidza kuti ndiye Alfa naOmega, Kutanga nekupedzisira. Kuzivikanwa kwakadii.
Saka Mwari akaita chiratidzo chinoshamisa mudenga pamusoro pegomo reSunset kuArizona inova America yekumadokero. Ndiye Mutongi mukuru anotitonga neShoko rake. Zvino kwapera mazuva masere aizotumira vatumwa vanomwe kune hama Branham pagomo rimwechete iroro vachizomupa basa rekuzivisa zvisimbiso zvinomwe zvaizozivisa zvakavanzika zvakadzama zveBhaibheri. Zaruriro idzi dzaizogonesa Mwenga mumakore aizouya kuti agadzirire kuuya kweMutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa chaputa 10 achauya kuzomutsa vakafa parumuko rukuru. Mwenga ega ndiye achatenda nekutevera chokwadi chakadzama cheShoko ratichatongwa naro naMwari. Chiratidzo mudenga, chichitiyambira kuti titevere Magwaro zvakazara pakutenda kwedu nekuti tichatongwa neShoko zvakaringana.
Gore rakazadzisa dudziro yekutanga yezwi rekuti “kuvonekwa”, kwaive kuvonekwa kwechiratidzo, cheMwanakomana wemunhu mudenga. Ndiye Mutongi achatitonga neShoko.
JOHANE 12:48 Unondiramba, asingagamuchiri mashoko angu, unomumwe, anomutonga; Shoko randakareva ndiro richamutonga nezuva rokupedzisira.
Avo vanoisa kutenda kwavo pamazwi akataurwa nemunhu vakashamiswa kwazvo uye vacharwadziswa.
62-0318 Shoko rakataurwa Ndiro Mbeu Yekutanga Chikamu 2
… Zvino, zvinhu izvi zvose zvandataura, kana zvisingaenderani neBhaibheri, kana kuti kutaura zvimwechete neShoko raMwari, zvakaipa, zvakaipa.
Kubata mazwi akataurwa nehama Branham hahusi humbowo hwakakwana. Munofanirawo kuzviringanisa neBhaibheri kuti zviri kuenderana neMagwaro here.
61-1119 Simba Rakanakisa rakaitwa neKuneta Kwakanakisa
Akabva ati, “Zvakanaka, pano, pane vashumiri vakawanda vandiri kumiririra ndiri pano kubva muguta guru rese iri.” Akati, “kana mukavaudza kuti Mutumwa waMwari akakupai zviratidzo izvi akakuudzai kuti mubhabhatidzwe neZita raJesu, zvino vanozoda kuzvitambira.
“Zvakanaka,” ndati, “kuita uku kwakaneta kupinda mvura iri mudhishi.” ndati, “handina basa nekuti chero mutumwa achatii, kana zvisiri zveShoko, handitendi kwazviri.” ndati kana mutumwa iyeye akandiudza chimwe chinhu chakasiyana naizvozvo, handingatendi zvinoreva mutumwa iyeye.”
Mutumwa wechinomwe haangatendi zvakataurwa nemutumwa waShe kunze kwekunge zvaive muMagwaro.
Saka kana mukatenda chinhu nekuti chakataurwa nemutumwa wechinomwe, kutenda kwenyu kwakafanana nemvura iri mudhishi.
Saka ngatitarisei mhinduro tichitangira pakutenda pekuti gore guru ndiro mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa chaputa 10.
Gore guru raive mamaira 27 mudenga nguva dzese neimwe nzira akava Mutumwa mukuru anomira panyika negungwa. Kana zvakadaro, zvinotsanangurwa sei kuti paive pasina tsoka, uye pasina gungwa?
Hapana chakaipa. Zvakaiswa kuti zvive pamweya. Sekuti: “akaisa tsoka imwe panyika (zvinomiririra America) neimwe tsoka mugungwa (Zvinomiririra Rome)”. Izvi zvinoonekwa semhinduro yakadzama uye yakachenjera nevatendi veMharidzo vakawanda.
Hama Branham havana kubvira vatsanangura gore iri nenzira iyi, saka tiri kushanda nekuturikira, kwete mazwi akabatwa.
Handina chokwadi kuti izvi zvinotsanangura chii sezvo kuturikira uku kwe “nyika negungwa” hakusi kwechokwadi uye kunongobvisa vanhu kubva paMagwaro. Rangarirai kuti muRaodikia Jesu akamira kunze kwemusuwo wekereke. Ndiye Shoko. Kana zvichionekwa kubva pakuturikira kuri pamusoro, Shoko harisi kuparidzwa mumakereke. Shoko rakatsiviwa nendangariro dzevanhu. Kana ukafamba kubva pane ino kereke kusvika pane iyo, unosangana nendangariro dzakasiyana siyana sezvo vanamufundisi vachiturikira mazwi akataurwa aya zvakasiyana. Saka chokwadi chiri kupi?
Maitiro aya ekuparidza zvichibva pamazwi akabatwa anoburitsa matambudziko matatu:
Chekutanga, vaparidzi vanotaura zvisina kubvira zvataurwa nehama Branham. Vaparidzi vanotaura zvavanofunga kuti aida kureva.
Chechipiri, zvinorwisana neMagwaro. Gungwa rinomiririra vanhu vazhinji nemarudzi vasina kugadzikika.
ZVAKAZARURWA 17:15 Zvino akati kwandiri: mvura yawavona inogarwa nemhombwe, ndivo vanhu, navazhinji namarudzi nendimi.
Roma inomiririrwa nemukadzi mushava wekuna Zvakazarurwa 17.
“Nyika” inomiririra America muna 1620 apo madzibaba ePilgrim akasvika paDombo rePlymouth. Asi zvirwere, kunyanya mhezi dzechibhokisi, dzakaunzwa kuAmerica munana 1500 nevanhu vekuSpain, zvaive zvauraya mamiriyoni evanhu vemaRed Indians kuchisara maIndia mashomanana achigara nyika yeUnited States. Vamwe venhorondo vanofungidzira kuti vaisadarika vanhu 10 miriyoni pakuwanda kwavo. Saka “nyika” mumagwaro inoreva nzvimbo dzaive dzisina vanhu vakawanda vanogaramo dzemuUSA muna 1620, zvichienzaniswa neEurope yaive yakawandisa vanhu yainzi “gungwa”. Europe yaive nenyika duku pane America, yaive nevanhu vaifungidzirwa kuva 80 miriyoni muna 1620. Nhasi, muna 2016, America ine vanhu vakawandisa vanodarika 320 miriyoni vakawandisa kukunda 200 miriyoni vanogara muEurope yekumadokero.
“Nyika” inomiririra America sezvo yaive mumazuva emadzibaba ePilgrim, kwete zvairi nhasi uno. America nhasi yakawedzera huwandu hwevanhu vayo kanopetwa kanodarika ka 30 uye yakashandura maitiro ayo kubva pahunhu hwegwayana kuita hunhu hweshato. Haisisiri gwayana zvachose.
Kana muchitenda zvinotaurwa nevanhu, kunamata Mwari kwenyu kutambisa nguva.
Chechitatu, kana vanhu vakazvivakira dzidziso kubva pamazwi akataurwa nemunhu, vanenge vachivimba nehungwaru hwemunhu. Asi isu hatiponeswe nekuchenjera. Tinoponeswa nekugara tichitevera Magwaro. Dambudziko riripo pakungwara nderekuti vamwe vaparidzi vakangwarawo. Saka zvimwe zvitendero zvakasiyana siyana zvinobva zvasimuka, zvese zvinotevereka, asi zvese hazvina chokwadi. Kukoshesa mazwi akabatwa akasiyana kunokonzeresa musiyano usingazogadzirisiki, saka vanozviti “veMessage churches” vakabva vapatsanurana kuva masangano akasiyana siyana. Mufananidzo waDanieri wemuHedeni unopatsanurana kuva makumbo maviri uchibva wazopatsanurwa kuva zvigunwe gumi. Isu maHedeni tinofunga kuti takangwara asi tinopedzisira tafamba tichienda nenzira yekutadza yakagara yataurwa naDanieri. Dombo rakarova mufananidzo raive Shoko. Dombo (Shoko) raive kunze kwemufananidzo, saJesu (Shoko) ari kunze kwekereke yeRaodikia.
Nei veMharidzo vachitenda kuti gore ndiro Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa 10?
Kutenda uku kunonyanya kubva pakutadza kuturikira zvakanaka mazwi akataurwa kamwechete:
Uye kana zviSimbiso zvavhurwa chakavanzika chaziviswa, Mutumwa anouya pasi, Mutumwa, Kristu, achiisa tsoka imwe panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro pake. Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe uyu ari panyika panguva yekuuya uku.
Vatendi veMharidzo vanotenda kuti pakuuya kwemutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 panyika “akapfeka gore” hama Branham vanofanira kuva vari panyika. Kubva pamazwi akabatwa aya, iyi inoita kunge nyaya yakanaka. Gore rimwechete raive richiyanana nehama Branham raive gore ra 1963. Saka vanofanira kutenda kuti gore iri ndiro raive Mutumwa. Hakuna chimwe chiitiko chinganzi ndiko kuuya kweMutumwa chakaitika hama Branham vachiri vapenyu.
Asi tarisai zvakanakisa. “Kana Zvisimbiso zvazarurwa zvakavanzika zvaziviswa, ndipo pachaburuka Mutumwa.
Mutumwa achaburuka chete kana Zvisimbiso zvazarurwa, kwete zvisimbiso zvisati zvavhurwa.
Gore rakatorwa mifananidzo musi wa 28 Kukadzi 1963. Hama Branham vakazozivisa Zvisimbiso Zvinomwe mavhiki matatu akazotevera pakati pa 17 na 24 Kurume 1963.
Pakaonekwa gore musi wa 28 Kukadzi hama Branham vaiziva zvinhu zvishomanana pamusoro peZvisimbiso zvinomwe uye panguva iyoyo vaive vasati vambopihwa basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe.
Hama Branham vakaenda kuGomo reSunset muna Kurume 1963 kunovhima. Nguva yekuvhima yakavhurwa musi wa 1 Kurume. Hama Branham vakaparidza kuHouston musi wa 4 Kurume, vakazoenda kunovhima mumashure maizvozvo. Vatumwa vanomwe vakauya kwaari nguva yekuvhima yava kuda kunovharwa nekuti yaivharwa musi wa 10 Kurume, ipapo ndipo pavakamupa basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe.
Saka gore rinokwanisa kuva risiri Mutumwa aiburuka sezvo zvakavanzika zveZvisimbiso zvinomwe zvaive zvisati zvaziviswa musi wa 28 Kukadzi. Hama Branham vaive vasiri paGomo reSunset panguva iyoyo.
Zvino tarisai pamazwi akabatwa aya zvakanakisa.
Akati “mutumwa wechinomwe uyu ari panyika panguva yekuuya uku”.
Hama Branham vairevei nekutaura kuti “kuuya uku”?
Vaive vataura pamusoro “pekuuya” kuviri.
Ngativerengei ndima iyi zvakare.
63-0317E Musiyano Uri Pakati peNguva dzeMakereke Manomwe neZvisimbiso Zvinomwe.
Ibhuku, Bhuku rakavanzika. Ibhuku redzikinuro. (tichataura nezvazvo muchinguvana.) Zvino, tinoziva kuti Bhuku redzikinuro harinzwisisiki zvakazara: rakasiirirwa mukati menguva dzemakereke matanhatu, asi kumagumo, pamazuva enzwi remutumwa wechinomwe, achasunganidza zvese zvakasiirirwa nevamwe vake, zvakavanzika zvikaburuka kubva kuna Mwari seShoko raMwari zvikazivisa zaruriro yaMwari yese. Ipapo Kuzara kwehuMwari nezvimwe zvese zvinenge zvagadziriswa. Zvakavanzika zvese: mbeu yenyoka nezvimwe zvese zvinozoda kuziviswa. (Zvakavanzika zvaburuka).
Zvino, muri kuona, handisi kungotaura zvichibva munjere dzangu. Ndizvo.... Ndizvo ZVANZI NAJEHOVA. Ndichakuverengerai kubva muBhuku: mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa izvi zvakataurwa nemaporofita ake matsvene. Ndiwo maporofita akanyora Shoko. Inzwi rese renguva yekereke yechinomwe, nguva yekereke yekupedzisira, zvakasaririra zvese izvo zvakasiirirwa kubva mukati menguva dzese dzemakereke, zvichasungwa pamwechete. Uye kana Zvisimbiso zvavhurwa uye chakavanzika chaziviswa, Mutumwa anoburuka, Mutumwa, Kristu, achiisa tsoka yake imwe panyika neimwe pamusoro pegungwa nemurarabungu pamusoro wake. (Mutumwa anoburuka)
Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya uku.
Kuuya kupi kwacho? Kuuya kwezvakavanzika, kana kuburuka kweMutumwa?
Regai Hama Branham vapindure mubvunzo uyu nekuenda kupeji rinotevera.
63-0317E Musiyano Uri Pakati peNguva dzeMakereke Manomwe neZvisimbiso Zvinomwe
Uye Pano Iye [Mutumwa mukuru] akadzoka muchitsauko 10 mumashure menguva yekuuya, kuti zvakavanzika zvese zvipedziswe, zvisimbiso zvivhurwe, achipika kuti nguva haizovipo zve.
Saka Mutumwa mukuru anoburuka mumashure mekunge zvakavanzika zvaziviswa.
Hama Branham vanopedza kuzivisa zvakavanzika pakupera kwegore 1965. Saka mumashure menguva iyoyo ndipo chete paizouya Mutumwa mukuru.
Sekupa kwaiita Johane mharidzo yake, guva imwechete yekuti Mesiah anouya pamazuva... Johane aiziva kuti aizoMuona, nekuti aizoMuzivisa. Uye tinoona kuti muMagwaro kuna Maraki 4, kune mumwe aizova saJohane, Eria, Shoko raMwari raizosvikira kwaari, uye iye aizozivisa kupfurikidza Mweya Mutsvene zvakavanzika zvaMwari zvese uye kudzosera kutenda kwevana kumadzibaba avo vapositora vekutanga: kudzosera zvakavanzika izvi zvese zvakasiirirwa mukati menguva dzese dzemasangano idzi. Zvino, ndizvo zvinotaura Shoko. Ini ndingoripo kuita zvarakataura.
Saka hama Branham vaifanira kuzivisa zvakavanzika. Saka vaifanira kuva panyika pakuuya kwezvakavanzika.
“mutumwa wechinomwe uyu anenge ari panyika panguva yekuuya uku”
“Kuuya uku” kumwechete. Hama Branham vaive vari panyika chete panguva yekuuya kumwechete kwekuuya kuviri.
Vaifanira kuva varipo kuti vatambire zvakavanzika pazvaiuya. Saka, sezvo aivepo panguva imwechete yekuuya kuviri, vachange vasipo apo Mutumwa mukuru achaburuka.
Zvakazarurwa chaputa 10 inoshanda nevatumwa vaviri.
Zvakazarurwa 10: 1 – 6 Inotaura pamusoro peMutumwa mukuru anoshamisa anova Jesu. Asi anoburuka chete kana Bhuku ravhurwa uye zvakavanzika zvaMwari zvaziviswa neMutumwa wechinomwe anova mutumwa ari munhu. Saka mutumwa wechinomwe , akataurwa kuna Zvakazarurwa 10:7, anova hama Branham, anofanira kuva ari panyika apo zvakavanzika zvinouya kubva kuna Mwari sezvo basa rake riri rekuzivisa zvakavanzika zvaMwari nekutidzosera kuBhuku raMabasa avapositora.
Zvino, tinoona Bhuku rakasimbiswa kanomwe zvino, ndiro chakavanzika chedzikinuro. Ibhuku redzikinuro rinobva kuna Mwari. Zvino, zvakavanzika zvese panguva ino zvinofanira kuva zvapedziswa pamazuva enzwi remutumwa uyu. Zvino, pano pane mutumwa panyika, (Zvakazarurwa 10:7) nemumwe Mutumwa, Mutumwa mukuru anoburuka (Zvakazarurwa 10:1-6) tariri, Mutumwa uyu aive mutumwa wepanyika, nhume. Asi pano pane mumwe anoburuka kubva kudenga: murarabungu, sungano. Mazviona here? Kristu chete, anofanira kuva ari iye; sezvazvaive kuna Zvakazarurwa chitsauko 1, amire pakati pezvigadziko zvinomwe zvemwenje zvendarama nemurarabungu zvaiita sematombo ejasipari uye resardisi.
Vatumwa ava vese vari vaviri vaifanira kuva panyika nguva imwechete here?
Uye anodzoka pachitsauko 10 mumashure menguva yekuuya, kuti zvakavanzika zvese zvipedziswe, zvisimbiso zvivhurwe, nekupika kuti nguva haichazovipo zve. Akati, “Kana mutumwa wechinomwe atanga kunzwikwa, zvakavanzika zvichapedziswa yova nguva yekuvonekwa kweMutumwa. Tave pedyo, padhuze chaipo.
Gore rakaonekwa musi wa 28 Kukadzi. Izvi zvakaparidzwa mavhiki anokwana kuita matatu musi wa 17 Kurume gore raonekwa kare. Anotaura nezvekuuya kweMutumwa munguva yaizouya, chinhu chaive pedyo kuitika. Anoti Mutumwa mukuru achauya chete kana zvakavanzika zvese zvauya hama Branham vapedza kuzvitsanangura.
Kana Mutumwa akauya muma Kukadzi 1963 zvakavanzika zveZvisimbiso zvisati zvaziviswa muna Kurume zvese izvi zvinenge zvakapesana.
Akatora Bhuku aka ... reZvisimbiso akazvivhura akaratidza mutumwa wechinomwe, neizvi zvega, zvakvanzika zvaMwari, ndizvo zvakavanzika zvemutumwa wechinomwe. Zvino, tangobuda munguva dzemakereke nenhorondo inoratidza izvozvo. Mazviona here? Imharidzo yemutumwa wekereke yechinomwe.
Zvakanaka, kuratidza zvakavanzika zviri munguva yakadarika, zvinhu zvese zvakadarika: Zvakazarurwa 10:1-7. Zvinhu zvichaitika. (Chaputa iyi inotaura nezvezvinhu zvichaitika. Nei?)
Mutumwa wechinomwe anofanira kuva panyika kuti atambire kuuya kwezvakavanzika nekuti ndihwo hushumiri hwake hukuru. Nekuzivisa zvakavanzika, Mharidzo yake inogadzirira nzira yekuuya kweMutumwa mukuru.
Mavhiki anokwana matatu mumashure mekuonekwa kwegore, hama Branham vakaisa Zvakazarurwa 10:1-7 pakuti ichazadziswa panguva yaizouya. Izvi zvinotiudza kutii.
Hushumiri hwehama Branham hwekuonesesa munguva yakadarika hwaingokwezvera kutariswa kweraizova basa ravo.
Saka Zvakazarurwa 10:7 yainyanya kusanganisira ramangwana rake rekuzivisa Zvisimbiso nemuono wakadzama waizozarurwa mumashure maizvozvo kuitira kuti titange kunzwisisa Magwaro.
Akazobva muna 1965 mumashure maizvozvo, Mharidzo yake ichaenderera mumazuva enzwi rake. Mumazuva aizouya mharidzo yake yakatapwa pamakaseti uye zvinyorwa zvake zvinenge zvichiri kuwanikwa. Mumakore aizotevera, mumashure mekuenda kumusha, tinofanira kubata kukosha kwekuparidza kwake. Tinofanira kusimbisa kutenda kwedu neMagwaro. Tinoda miono yemukati iyi kubva mudzidziso dzake kuti tidzokere pakutenda kwevapositora uye kuti tigadzirire kuuya kweMutumwa mukuru.
William Branham, munhu, haasi iye chinhu chakakosha. Imharidzo yaakaparidza yakakosha.
Ndicho chikonzero nei Kristu anova Shoko, mumufananidzo wegore rinoshamisa, akatorwa mifananidzo apo hama Branham vaive vasipo zvachose.
Shoko rakaziviswa ndiro rakakosha, kwete munhu akazivisa Shoko.
JOHANE 3:30 Iye anofanira kukura, asi ini ndinofanira kudukupiswa.
Mazwi ane mbiri aJohane Mubhapatidzi. Akazivisa Kuuya Kwekutanga kwaJesu akaita nzira yemuporofita ane Mharidzo inozozivisa Kuuya kwaJesu Kwechipiri.
Johane akanongedzera Jesu seMunhu akafamba pakati pevanhu.
Hama Branham vakanongedzera Jesu seUyo anofamba nemapeji eBhaibheri.
Asi pane musiyano mukuru. Haasi William Branham anonongedzera Kuuya kweChipiri kwaKristu, asi Mharidzo yake ndiyo ichaita izvi.
61-0316 Kereke inosarudza Murairo panzvimbo peNyasha
... Munhu wechigumi nenomwe wandakabhapatidza, ipapo ndakanzwa chimwe chinhu chichiti, “Tarisa mudenga” ndikatarisa, tarirai kwakauya Shongwe yoMoto ichiburuka kubva kudenga. Ikamira pamusoro pepandaive ikati, “SaJohane Mubhabhatidzi zvaakatumwa kuzokura nzira yekuuya kwaKristu kwekutanga, Mharidzo yako ichakura nzira yekuuya kwechipiri kwaKristu.”
Ndapota tarirai chitadzo chakaziviswa nemushambadzi wezvinyorwa muna 1993 pachinyorwa “The Revelation of the Seven Seals”.
Mufananidzo weShongwe yoMoto pamusoro pemusoro wehama Branham waive nemutumwa aitaura
Sekukura kwakaita Johane Mubhabhatidzi nzira yekuuya kwekutanga kwaKristu, Iwe uchakura nzira yeKuuya Kwechipiri”.
Hama Branham havana kubvira vataura izvozvo.
Vakabva munhandare makore anokwana kuita 60 akadarika, asi mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe tinokwanisa kunzwa mharidzo dzavo totwasanudzirwa kutenda kwedu. Saka Mharidzo yavo ndiyo yakakosha. Kwete ivo.
Semunhu wenyama mazuva avo aive akatarwa asi Mharidzo yavo ichararama nekuenda mberi mumazuva anouya, nguva refu mushure mekufa kwavo. Vashambadzi zvinorwadza vanoda kukoshesa munhu. Izvi hazvina kunaka.
Tarirai kumwe kukanganisa kwakaitwa nevashambadzi vezvinyorwa.
Bhaibheri rinoti “Mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe”.
Ndiyo nzira yaimboshandiswa kudhidha mabhuku. Parizvino mabhuku nemakaseti ave kunzi “Izwi raMwari”. Izvi hazvisiriizvo.
Kutaura kwekuti “Izwi raMwari” hakuna kubvira kwaonekwa muTestamente Itsva.
Saka hatina kubvira tavimbiswa Izwi raMwari panguva yedu. Zvakare, vashambadzi vanotevera zvavanofunga ivo, zvisingabvi muMagwaro, mukuedza kwavo kusimudzira munhu William Branham.
Kugona kutaura nekukurudzira kuti vanhu vatende muzvinhu zvisiriizvo kunobereka kusimba pakutenda kwako muzvinhu izvozvo, kutadza uye kukudza nyaya pasina nyaya. Tinoda kudzikama uye mazano akanaka.
Ngatiendererei mberi tichiratidza kuti gore harisi mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10.
Mumashure mekutorwa kwemifananidzo yegore, hama Branham vakaenderera mberi vachiisa kuuya kweMutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chaputa 10.
Ko nyaya yekuti nguva yakwana yekuti Mwenga wake atorwe aende? Chii, kuti nguva yakwana yekuti nguva haizovipo? Mutumwa agadzirira kuisa tsoka imwe panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro pake, netsoka, achiti, “nguva haichazovipo zve.”
Mavhiki anoda kusvika matatu mumashure mekuonekwa kwegore mutumwa aive achiri kugadzirira kumira akatsika nyika negungwa. Saka gore harisi kuuya kweMutumwa mukuru.
Mutumwa mukuru ane tsoka mbiri. Gore raive risina tsoka. Saka zvakare gore harizadzisi Gwaro raZvakazarurwa 10.
Kuturikira kwamboitwa kwakagadzirwa nevanotenda kuMharidzo kwekuti Mutumwa anofanira kuuya paRome neAmerica ( chero zvazvinoreva) parizvino zvinoratidzika kuti hazvina maturo. Mutumwa haasati auya pasi kunyangwe gore rakauya kare rikaenda.
Ndakaona mumwe mutumwa ane simba achiburuka kudenga, akapfeka gore: … murarabungu ...pamusoro pake, chiso chake chaive chakaita ….zuva, netsoka dzake sembiru dzomoto:
Zvino, tinoona chinhu chimwechete, chinova Kristu. Uye tinoziva Kristu agara ari Nhume kukereke. Zvakanaka. Anodaidzwa kuti Shongwe yomoto, Mutumwa wesungano nemamwe mazita akadaro.
Wakanga akabata bhuku duku yakazarurwa muruvoko rwake: … (Zvino, zvisimbiso zvaive zvapedza kuvhurwa panguva iyi. Tiri kuzvivhura parizvino; asi apa chinhu ichi chakavhurwa.) … Akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa norworuboshwe … pamusoro penyika.
Hama Branham vaive mubishi kuzivisa Zvisimbiso. Asi Bhuku rakazarurwa rinoreva kuti Mutumwa mukuru achauya pasi kana zvakavanzika zveZvisimbiso Zvinomwe zvaziviswa.
Asi ipapo munguva yekereke yekupedzisira, zvakavanzika izvi zvese zvichapedziswa zvoburitswa, Zvisimbiso zvichazarurwa neGwaiana zvoziviswa kukereke, ipapo nguva haizovapo.
Mutumwa mukuru anokwanisa kuuya panyika achitaura kuti “nguva haizovapo” mumashure mekunge zvisimbiso zvaziviswa. Kwete Zvisimbiso zvisati zvaziviswa.
62-1230 Ichi Ndicho Chiratidzo Chekuguma here Baba
Vamwe vatumwa vaive nhume, vanhu vepanyika. Asi Mutumwa uyu... Ava, vakati, “kumutumwa wekereke yeRaodikia,” kumutumwa wekereke yepaEfeso,” vatumwa venyika; tarirai, vanhu, nhume, vaporofita nevamwe vakadaro kukereke.
Asi, uyu haana kubva panyika. Akaburuka kubva kuDenga, nekuti zvakavanzika zvaive zvapedziswa zvese. Kana zvakavanzika zvapedziswa, mutumwa akati, “Nguva haizovapozve,” kutinhira kunomwe kwakabva kwareva manzwi ako.
Mutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa 10 achaburuka apo kereke, vatendi vechokwadi, vanzwisisa zvakavanzika zvaMwari. Mutumwa mukuru anomutsa vakafa vanozova chikamu chehupenyu husingagumi, sezvo nguva haizovapo kwavari. Havazorarami mukati menguva.
Kana Mutumwa mukuru uyu akataura ndiro Inzwi remutukwa mukuru uyo anoburuka kuzomutsa vakafa vakavigwa munyika kana mugungwa.
Anomira panyika nepagungwa sezvo arine simba pamusoro pazvo zvose uye achikwanisa kumutsa vatsvene kubva muguva.
Uyu ndiMambo, kurira kukuru kweShumba yerudzi rwaJuda, anoratidza simba rake guru nekukunda muvengi wedu mukuru, rufu. Rumuko ndiko kukunda kukuru kwaJesu pamusoro paSatani.
ZVAKAZARURWA 10:1 Zvino ndikavona mumwe mutumwa unesimba achiburuka kudenga, akapfeka gore; murarabungu wakanga uri pamusoro wake, chiso chake chakanga chakaita sezuva, netsoka dzake sembiru dzomoto.
2 Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruvoko rwake, akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa norworuboshe pamusoro penyika.
3 Akadanidza nenzwi guru, seshumba inorira iye wakati adanidzira, kutinhira kunomwe kukabudisa manzwi ako.
Kuita kwese “akadanidzira nenzwi guru” uye “wakati adanidzira” kunokwanisa kudyidzana nekufa nekumuka.
JOHANE 11:43 Wakati areva izvozvo, akadanidzira nenzwi guru akati: Razaro buda!
Razaro akamuka kubva kuvakafa.
MATEO 27:50 Zvino Jesu akadanidzira nenzwi guru akabudisa mweya wake.
51 Ipapo tarirai chidzitiro chetembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvika pasi. Nyika ikadengenyeka mambwe akatsemuka.
52 Mabwiro akazaruka, nemitumbi mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutswa.
Kuchema kukuru kweMutumwa mukuru ndiro inzwi remutumwa mukuru rinounza kumuka kwevakafa vaitenda kuBhaibheri kubva makore 2000 enhorondo dzemakereke.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari vakafa munaKristu vachatanga kumuka.
63-0421 Zuva Rekukunda (Vday)
Tese tine kukunda. Takarwa mukukunda kuzhinji. Kukunda kukuru kuri kuuya nekukasika, nekukasikisa. Zuva redu rekukunda kuzere ririko nekukasika, apo Mwanakomana waMwari achazarura matenga, odanidzira Nenzwi reMutumwa mukuru, uye achauya zvakare. Makuva achavhurika, vakafa vachamuka vakafamba.
Kubvumbi 1963, mwedzi miviri mumashure mekuonekwa kwegore, hama Branham vaiti Mutumwa mukuru achauya zvakare, imwe nguva inouya, kuzomutsa vakafa. Saka gore raive risiri Mutumwa mukuru.
Kutinhira kunomwe kuchareva chete kana vakafa vamutswa.
I VATESARONIKA 4: 16 … vakafa muna Kristu vachatanga kumuka:
I VAKORINTE 15: 52 … vakafa vachamutswa mukusavora; nesu tichashandurwa.
Kutinhira kunomwe kunofanira kuzoreva kana vakafa vamutswa kare kuti titungamirirwe muchiitiko chinoshamisa chekuti miviri yedu ishandurwe kuitira kuti tifambe mumhepo apo Ishe vanenge vatidana paKuuya kwake kweChipiri.
62-1230E Ichi Ndicho Chiratidzo Chekuguma Here Baba
Handizivi. Handizivi vanababa. Ndinongotaura chokwadi, kwamuri, sehama dzangu. Handizivi. Ndiyo- ndiyo here nguva? Zvaka- ... zvakavanzika zvese zvakapedziswa here? Kutinhira kwese kwapera here? Ndiko here kutinhira kunomwe, kuri kugadzirira kureva chimwe chinhu, kuti ungano duku yakaungana igamuchire kutenda kwekukwira kudenga, kuti vakwire kudenga paAnouya? “Nekuti tichashandurwa,” nekukasika sekuuya kuchaita vatumwa ivavo, “muchinguvana, mukubwaira kweziso; tichatorwa tese tikwire kudenga pamwechete neavo varere kumakuva, kunosangana naShe kumakore.
Kutinhira kunomwe kuchatipa kutenda kwekukwira kudenga uko kuchashandura miviri yedu. Vanhu vanotenda kuti kutinhira kunomwe kwakareva vakaparidza kutenda kwekukwira kudenga kwemwaka, asi vachiri mumiviri yavo, kana kuti vakatofa. Saka dzidziso dzekufungidzira idzi dzabudirira chete pakupatsanura vanotenda kuMharidzo yenguva yekupedzisira, asi havasati vashandira kuwana kukwira kudenga. Kana muine kutenda muruponeso, munoporeswa. Saka kana muine kutenda kwekukwira kudenga munokwira kudenga. Hakuna munhu ati akwira kudenga. Saka kana zvakadaro hakuna ati agamuchira kutenda kwekukwira kudenga. Nei? Kutinhira kunomwe kuchareva chete kana Mutumwa mukuru auya amutsa vakafa kubva kumakuva.
Pakupera kwenguva yePentecositi tinofanira kugamuchira, zvichibva paShoko, sekubatsirwa kwandaita naMwari kuti ndikuratidzei zviri pano, kuti tichaona-tichagamuchira nhume ichatora zvese zvakasaririra ozviisa pachena ozivisa chakavanzika chaMwari kuitira kukwira kudenga kwekereke.
Zvakare kuchauya kutinhira kunomwe kunoshamisa kusina kunyorwa nezvako zvachose. Ndizvo chaizvo. Uye ndinotenda kuti kupfurikidza kutinhira kunomwe uku kuchaziviswa muzuva rekupedzisira kuitira kuti Mwenga agadzirire aunganidzwe pamwe kuitira kutenda kwekukwira kudenga; nekuti nezvatiri nhasi uno, hatingagoni kuzviita. Tine chinhu chatinofanira kuwedzerwa; hatina kutenda kwakakwana kweruponeso rweMweya Mutsvene zvachose. Tinofanira kuva nekutenda kwakakwana kuti tishandurwe muchinguvana totorwa kukwira kudenga kubva panyika ino, uye tichaona kuti mushure mechinguvana, nekuda kwaShe, tichaona pazvakanyorwa.
Zvakavanzika zvese zvinotanga kuziviswa. Zvino kutinhira kunomwe koreva. Saka kutinhira kunomwe kuchagonesa Mwenga kuti ashandurwe afuke muviri mutsva usingavori. Ichave isiri dzidziso yakachenjera. Muviri wenyu mutsva uchange usina guvhu rinova chiratidzo chechikara pamiviri yedu. Tine dzidziso dzekutinhira dzine chitsama dziri kutenderera, dzidziso idzi dziri kubatsira kupatsanurana kuri kuramba kuchiita masangano evanotenda kuMharidzo yenguva yekupedzisira. Kutinhira hakuna kubvira kwanyorwa muBhaibheri. Asi hakuna kana rimwe remasangano aya rakapa munhu kana mumwe zvake muviri mutsva, uye vese vanotarisa dzidziso dzakanyorwa muBhaibheri.
Zvino tinosangana nerimwe dambudziko guru. Kutinhira uku kuchareva zvakare kumaJuda, koita kuti Herija akwanise kumisa kunaya kwemvura apo iye naMosesi vanoshandura mamiriro ekunze nezvinhu munguva yeKutambudzika kukuru.
63-0321 Chisimboso Chechina
Zvino, takamunzwa achiuya manheru adarika nemunondo wake mukuru wekuuraya. Tinoona kuti anouraiwa nemunondo zvakare, munondo weShoko. Shoko rakapinza, munondo unocheka kwese ndiwo unomuuraya, unomuwisira pasi. Mirirai kusvikira Kutinhira kunomwe kwareva manzwi ako kuungano iyoyo inokwanisa kutora Shoko raMwari yoriisa apo. Rinocheka nekuvevura. Vanokwanisa kuzarira matenga, vanokwanisa kuzarira ichi nekuita icho, chero chinhu chavanoda kuita. Ngaavongwe.
Ishe paasina kuuya muna 1977, vaparidzi vakabva vatsvairirwa mudutu refungidziro pamusoro peKutinhira kunomwe kuvhariridza kuti zvisanzi zuva raive rafanotaurwa rekuti Ishe vaiuya muna 1977 raive nyakanyaka. Asi fungidziro dzese idzi kukanganisa. Zvisinei kuti fungidziro dzavo dzakasiyana siyana ndedzei, dzakayananiswa neMagwaro akanyorwa muBhaibheri. Saka uku hakungavi kutinhira. Kutinhira hakuna kunyorwa muBhaibheri.
Kutinhira kuchapa Mwenga kutenda kwekukwira kudenga, uye kuchapa maJuda simba rekushandura mamiriro ekunze. Saka kuchareva panguva inoenda mwenga kudenga, kuchave kuratidzwa kwemasimba makuru pamusoro pemamiriro ekunze uye ezvinhu panyika, nekuti ndipo panodzokera Evhangeri kumaJuda nekuratidzwa kwesimba kunoshamisa pamusoro pemamiriro ezvinhu.
Tichiwedzera, Kuburuka kweMutumwa mukuru uyu inyaya yakadzama zvakare, nekuti anouya kumaJuda, uye kukereke. Mwari anokwanisa nguva dzese kuita zvinhu zviviri kana kudarika nguva dzese. Ndiye Mukuru pakubata mabasa mazhinji.
… Ngatitarisei kuna Zvakazarurwa chitsauko 10 zvishoma, kuti muwane kunzwisisa tisati tatanga kutarisa izvi. Zvino izvi zviri panguva yekupedzisira, nekuti teererai.
…Zvino ndakaona mumwe mutumwa unesimba achiburuka kudenga, akapfeka gore; murarabungu... wakanga uri pamusoro wake...
Kana mukatarisa ndiKristu (mazviona?), nekuti Iye muTestamente Yekare aidaidzwa kuti Mutumwa weSungano, uye ari kuuya kumaJuda parizvino, nekuti anenge apedza nekereke. Mazviona? Zvakanaka.
… chiso chake chakanga chakaita sezuva, ... netsoka dzake sembiru dzomoto:
Mucharangarira Mutumwa uya kuna Zvakazarurwa 1? chinhu chimwechete. Mutumwa inhume, uye Ndiye Nhume kuvaIsraeri. Mazviona?
Kereke inenge yakwira kudenga. Mazviona? Kana kuti iri kugadzirira kuenda kudenga. Ari kuya kukereke yake.
Kana kereke yakwira kudenga, Mutumwa mukuru anobva atanga neIsraeri. Asi kukwira kudenga kusati kwaitika, Mutumwa mukuru anoshanda nekereke.
Mutumwa mukuru angauya sei kune vese maIsraeri nekukereke? Anofanira kuburuka panguva yeshanduko apo Evangeri rinobva kumaGiriki richidzokera kumaJuda.
Chiitiko chikuru chinoitika apa kumutswa kwevakafa kubva kumakuva vaitenda kuBhaibheri mukati menguva dzemakereke.
Munokwanisa kuva nefungidziro dzese panyika, asi chiitiko chinotangira zviitiko zvenguva yekupedzisira chichava kumutswa kwevakafa muna Kristu. Ichi chichava chiitiko, kwete dzimwe fungidziro.
ZVAKAZARURWA 10:1 Zvino ndakavona mumwe mutumwa unesimba achiburuka kudenga, akapfeka gore; murarabungu wakanga uri pamusoro wake, chiso chake chakanga chakaita sezuva, netsoka dzake sembiru dzomoto.
2 Wakanga akabata bhuku duku yakazaruka muruvoko rwake akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa, norworuboshwe pamusoro penyika.
3 Akadanidzira nenzwi guru seshumba inorira, iye wakati adanidzira kutinhira kunomwe kukaburitsa manzwi ako.
Kutinhira kunomwe ndiko chakavanzika chizere. Asi kuchaitika kana vakafa vamutswa. Saka kuchange kwakanangana nevose maJuda nekereke.
Zvino, nei? Ngatizvitsigirei. Nei? Ndicho chakavanzika chisina munhu anoziva nezvacho. Johane akarambidzwa kunyora nezvako, chero, chero kunyora chiratidzo zvacho. Nei? Ichi ndicho chikonzero nei maive musina chaiitika – muzviitiko zvedenga; zvaizozivisa chakavanzika. Mazviona here izvi? Kana chiri chinhu chikuru kuru chaifanira kutaurwa, nekuti chaifanira kuzoitika, asi kana kutinhira kunomwe ...
Zvino, tarirai, kana vatumwa vanomwe vakauya kuzoridza hwamanda dzavo, kwaive neimwe hwamanda imwechete. Israeri payaive yakaungana, kwaive nehwamanda. Kana nguva isisipo, hwamanda yekupedzisira ... Kutinhira kumwechete, asi pano pane kutinhira kunomwe kwakatevedzana: motsi, piri, tatu, ina, shanu, tanhatu, nomwe kuverenga kwakanakisa. Kutinhira kunomwe kwakatevedzana, hakuna kureva ... kuita motsi, piri, tatu, ina, shanu, tanhatu, nomwe, kwakatevedzana. Ipapo kudenga hakuna kukwanisa kuzvinyora. Kudenga hakukwanisa kuziva nezvazvo, hakuna chimwe, nekuti hakuna chinhu chaiitika. Yaive nguva yekuzorora. Chaive chinhu chikurusa kusvika chaitwa chakavanzika kunyangwe kuvatumwa. Zvino, nei?
Dai Satani akaziva chidimbu chacho, aizokanganisa zvikuru. Kune chinhu chimwe chaasingazivi. Zvino, anokwanisa kuturikira chero chinhu chaangade, kana kugadzira chero rudzi rwechipo (ndinovimba kuti muri kudzidza) asi haakwanisi kuziva chinhu ichi. Hazvina kana kunyorwa muShoko. Ndicho chakavanzika chakazara. Vatumwa, zvinhu zvese zvakanyarara. Dai vakazununguka kamwechete zvingadai zvakazivisa chimwe chinhu, saka vakangonyarara, kunyarara chaiko; zvinhu zvese zvakamira.
Kutinhira kunomwe ndiko CHAKAVANZIKA CHIKURU. Asi vaparidzi veMharidzo yenguva yekuguma vanoshambadza pfungwa dzavo pamusoro pekutinhira. Vanhu vane rudo rukuru rwekunzi vakangwara. Dai vaiziva chokwadi pamusoro pekutinhira vangadai vainyarara zvavo, nekuti ndiyo nzira inodiwa naMwari kuti zvinyararwe. Sezvo vaine zvakawanda zvekutaura, vari kutadza.
“Zvichave rini, hama Branham?” handikwanisi kutaura. Handizivi. Asi rimwe remazuva, kana tikasazosangana zvakare panyika pano, tichasangana kumberi pa- pachigaro chekutonga chaKristu. Muchaona kuti mukamuri iyoyo, zaruriro ichibva kuna Mwari (sekuita kwakaita dzimwe dzacho dzese), kuti izvo … Chimwechete chezvisimbiso izvozvo, chikonzero nei chisina kuziviswa, chaive kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako, uko kuripo kwakanakisa, nekuti hakuna chiro chinoziva chiro nezvacho; hachina kubvira chanyorwa. Saka tiri panguva yekupedzisira; tasvikapo.
Hama Branham vaive vasingaziviwo kuti kutinhira kwaizoreva manzwi ako rini kana kuti kwaizoreva kutii.
Chichave chakavanzika chakazara kusvikira vakafa muna Kristu vamutswa.
Asizve munguva yekereke yekupedzisira, zvakavanzika izvi zvese zvichapedziswa zvoziviswa, uye Zvisimbiso zvichavhurwa neGwaiana zvoziviswa kukereke, saka ipapo nguva haizovapo zve.
Kana Zvisimbiso zvichinge zvaziviswa kukereke, ipapo mutumwa mukuru anobva aburuka opika kuti nguva haizovapo zve.
Pano takaona gore sekuonekwa kwechiratidzo cheMwanakomana wemunhu kudenga.
Zvino regai titarise kuturikirwa kwehipiri kwezwi rekuti “kuonekwa”.
MuBhaibheri Kuuya kwechipiri kwaShe kunodaidzwa zvekare kuti kuvonekwa Kwake.
Vanotenda kuMharidzo yenguva yekupedzisira vanoti gore rakaonekwa ndiko kuvonekwa kwaKristu, kana kuti kutanga kwekuonekwa kwaKristu. Kutaura kwavo uku kwakapusa kana mukada kutanga kunyatsobatanidza kuti vari kuda kunyatsotaura kutii.
Kana gore riri kuonekwa kwaKristu zvino vanofanira kusimbisa kuti musiyano unofanira kuiswa pakati pekuuya nekuvonekwa kwaKristu. Hama Branham vaisimbisa musiyano uyu muna 1962 asi 1962 asati asvika uye mumashure ma 1962 vaishandisa kuonekwa kwaShe vachireva chinhu chimwechete neKuuya kwaShe.
Ngatitangei kutarisa kuti ndepapi Kuuya nekuonekwa pazviri zvinhu zvimwechete.
Ipapo tinotarisa hushumiri hwaMerkisedeki hwaKristu kuti titsanangure musiyano pamashoko aya.
64-0531 Bhora Rakasiyana
Zvinoenderana nekuti wakasungirirwa papi. Mazviona? Saka dai Ishe Jesu Kristu, Mufudzi weboka, agara akaita kuti moyo wako usungirirwe paari, kuti, kana Mufudzi mukuru avonekwa, tichavonekwa pamwechete naye.
1964, gore raive ratotorwa mifananidzo kare, hama Branham vaive vachiri vakamirira Kristu kuti avonekwe.
Saka pachokwadi gore kwaive kusiri kuonekwa kwaKristu.
VAKOROSE 3:4 Kana Kristu, iye vupenyu bwedu, achivonekwa, nemi vo muchavonekwa pamwechete naye pakubwinya.
Hakuna akavonekwa arinaKristu pazuva rakatorwa mifananidzo yegore. Hama Branham vaive vasipo. Kana isu tese. Vatendi vakawanda vanhasi vaive vasati vatombozvarwa muna 1963.
65-0718M Kuedza Kubatira Mwari Asi Husiri Hurongwa HwaMwari
… Tiratidzei nzira Yamakaita yatinofanira kufamba. Mutipe nyasha nerudo Rwenyu, kuti titevere nzira idzodzo nemirairo yenyu nemoyo yedu yese, kuti tigowanikwa, zuva iroro, muna Kristu, pasina zvipomerwa, nekuti tinotenda, Ishe, kuti kuvonekwa kwake kwave pedyo.
(1965 aive achiri akamirira kuti Kristu avonekwe)
TITO 2:13 Takatarira tariro inofadza, nokuvonekwa kwokubwina kwaMwari mukuru, nomuponesu wedu, Kristu Jesu.
60-1211M Vasikana Vane Gumi nevaneZana Nemakumi Mama Ezviuru ZvemaJuda
Kuuya kwake kuchave chakavanzika, hakuna achaziva kuti zvichaitika rini. Tinofanira kuva takagadzirira uye tiine tariro. Hatizivi kuti nguvai. Asi, asi chero zvaichava, hatikwanisi kudzivisa chero chinhu muno; nekuti, pachangovonekwa Jesu, zvese zvichamuka, zvakafa kana zvipenyu!
Pachaonekwa Jesu, vakafa vachamuka kubva kumakuva.
Hapana akamutswa muna 1963. Kana zvaive zvakadaro, zvino hama Branham vakapesana nazvo nekuti vakazofa muna 1965.
60-1209 Kereke yeNguva yeSardisi.
O Baba, kana tikatarisa paCalvari, zvinobvisa kukura kwese kwatiri, ha-hatina chataiziva ipapo asi Kristu Iye akarovererwa. Ipapo patakaona izvozvo kuti akamuka pazuva rechitatu zvichibva muMagwaro, kuitira kururamisirwa kwedu, akadzoka kwapera mazuva makumi mana ari Mweya Mutsvene, kuti agare nesu kusvikira azovonekwa nemeso edu ari kumakore panguva yekupedzisira. Tiri kuona nguva yekuguma iyi ichiuya zvishoma nezvishoma parizvino. Uye tiri vanhu vane mufaro, Ishe, nekuti – nekuti makatipa mukana uyu.
Kana gore raive kumusoro kudenga, raive ndiko kuonekwa kwekuonekwa kwaKristu zvino Mweya Mutsvene hauchagari pakati pedu.
Mweya waizogara mukereke kusvikira kuvonekwa kwaKristu mumakore. Kuonekwa kwaKristu kunoonekwa nameso edu enyama mumakore kunoratidza kupera kwenguva yekereke apo Mwenga anobatana naye mumakore.
1965 Nguva yeKereke yeFiradhefia Kupa Ruremekedzo
Asi regai nditaure izvi. Mwari wedu haana kukundwa. Vanhu vanoti vanozarura musiwo kuna Mwari voupfiga, asi varevi venhema. Zvese zvaakapiwa naBaba zvichava kwaari, uye uyo anouya Kwaari haangarashirwe kunze; Haangarasikirwe NEMUMWE wavo. Johane 6:37 - 39. Kana nhengo yekupedzisira yakasarudzwa yemuviri waKristu yapinda, ndipo pachavonekwa Ishe wedu.
Kuvonekwa nekuuya chinhu chimwe. Kuuya kwechipiri kuchaitika kana nhengo yekupedzisira yeMwenga waKristu yapinda.
1965 Bhuku reNguva dzeMakereke Nguva yeKereke yeSardisi Kutongwa
“Ndichauya kwamuri sembavha.”
Sardisi yekare yaigara yakashungurudzwa nemabhanditi aiuya achibva kumakomo achipamba vanhu. Saka vaiziva zvakanyanyisa kuti Mweya waitaura kutii pavaiti kuuya kwaShe kwakaita sekuuya kwembavha. Kutendeka nekugadzirira chete ndiko kuchaita kuti tikwanire Kuuya Kwake. Izvozvi tave kuziva kuti iyi imharidzo kumudzambiringa wenhema, nekuti kuuya kwaShe kuchaita sezvazvakaita mumazuva aNoah. Vanhu vasere vakaponeswa vaiziva pamusoro peMvura zhinji yaizouya, nekuda kwekuziva kwavo vakagadzirira uye vakachengeta. Asi vamwe vese vaive vasinganamate vakaparadzwa. Kunyangwe vaigara vachitaura neavo vaive vakarurama vachinzwa chokwadi, vakachiisa parutivi kusvikira vakazotadza kuchishandisa zvachose. Vanhu venyama vakakwana ava munguva yekare iyi vanoratidza hunhu hwevanhu vanhasi maKristu akasarudzwa akazadzwa nezvinhu zvenyika, vanofara mazviri kusvika pachidanho chekuti vanoshaiwa rudo nezveMweya, uye havazove neruzivo, kana gadziriro yekuuya Kwake. (Iri raive gore ra 1965, nguva refu yakazotevera mushure mekunge gore ratorwa mifananidzo).
Anotaura pamusoro pekuuya nekuvonekwa kwaMwari sechinhu chimwechete chakafanana.
Nguva Yekereke yeSimyrna
Kereke payakazvitendera kubva pane chokwadi chekutanga, saAdamu naEva, rufu rwakapindira. Chipurisita chechimanje manje ndivanamufundisi mapasita vanofambisa zvinhu mukereke zvichibva pamifungo yavo. Hamuna simba maari. Akava mhombwe. Nguva yakabva kereke pamutambo, ichitevera chipurisita chakaitwa nevashumiri muchikwata chinosarudza hutungamiriri kubva paMweya Mutsvene neShoko rake, nguva imwechete iyoyo rufu rwakapinda akatanga kurwara, paakatanga kurwara akashanduka kubva pakuva sangano risina simba revanhu vaive nechombo chebopoto chete. Haana chaaigona kubereka paMweya, sezvo tariro yake yaive yakavakirwa pamusoro pehurongwa hwekereke kwete pakutenda kunobva muBhaibheri. Vakadyara hurongwa hwekereke saka vachakohwa hurongwa hwekereke. Vanodyara kurasisa saka vakabereka vana vakarasika.
Chiprista chanhasi ndivo vafundisi vanofambisa zvinhu mukereke nenzira dzavo dzavanofunga pachavo.
Chombo chavo ndiro gakava pavanoruka nhaurirano yemashoko avakabata paitaura vamwe vanhu (nemukaha mukuru nekuti havana Magwaro kuti vatsigire pfungwa dzavo) pamusoro pepfungwa yakapusa yakaita sekuti, “Akatanga kuvonekwa mugore uye parizvino ari kuonekwa kakawanda muMwenga wake”.
Hama Branham havana kutaura izvozvo. Dzidziso iyi haina kutorwa muMagwaro.
Vanhu parizvino vave kugutswa nekutenda pane zvinhu zvisiri muBhaibheri, semasangano.
Kereke yekutanga haina kubvira yatenda chinhu ichocho. Saka kutenda izvozvo hazvingakudzoserei pakutenda kwekereke yekutanga.
Kereke yeNguva yeEfeso
Ndakati Kereke yeChokwadi icharamba ichiedza kuita sezvayaive muBhuku raMabasa Avapositora. Ndizvo chaizvo. Asi takaona kuti Shoko kupindira kwechakaipa kusvikira chokwadi chadzimwa mumazuva ekupedzisira apo Mwari vave pedyo kuvonekwa.
Bhuku reChurch Age rakashambadzwa muna 1965 akati Ishe havasati vaonekwa.
Vafundisi havana kubvira vataurwa muBhuku raMabasa, saka havana kubvira vabata basa pakereke yekutanga.
Shoko rekuti “pasita” mufundisi rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva. MaPasita haadaidzwi kuti vafudzi (Shepherds) muBhaibheri. Kuvaisa pakutonga kereke hazvisi muMagwaro, sezvo iri tsika yemumasangano.
Asi nekukoshesa kwavo kukwidziridza mazwi akabatwa paitaura vanhu seakakosha kupinda Magwaro, vaparidzi veMharidzo yenguva yekupedzisira iri kukonzeresa kudzimwa kweChokwadi chemuBhaibheri. Saka Jesu, anova Shoko, akamira kunze kwekereke yega yega yenguva yeRaodikia. Bhaibheri harina kubvira rataura kuti pane vamwe vari nani. Vanotenda kuMharidzo vakawanda nhasi uno vanotenda kuti kuenda kwavo kukereke kakawanda ndiko kunovaporesa. Zvisinei nekutadza kwavo apo vanotarisa kubva pane mamwe mazwi akabatwa anoita seanovayananisira. Asi vakumbirei kuti vatsigire kutenda kwavo neMagwaro havazokwanisi, nekuti Shoko harisisimo mukereke. Vanobva vasimbisa kutadza kwavo nekumhura avo vanovapikisa nekutarisa zvinobva muBhaibheri. Vatendi veMharidzo yenguva yekupedzisira havasisina basa nekutenda zvaitendwa nevenguva yekereke yekutanga.
Kereke yekutanga yaitenda kuti Kristu achauya akashonga gore kwete kuuya ari gore.
Magwaro anoshandisa Shoko rekuti “kuvonekwa” kureva zvakare kuti “kuuya”.
MARAKI 3:1 Tarirai, ndinotuma nhume yangu, iye achandigadzirira nzira yangu pamberi pangu; ipapo Ishe wamunotsvaka, achasvika pakarepo patemberi yake, iye Mutumwa wesungano, wamunoshuva, tarirai anovuya ndizvo zvinotaura Jehova.
MARAKI 3:2 Asi ndiyani ungatsunga nezuva rokuuya kwake? Ndiyani angamira kana achivonekwa? Nokuti akafanana nomoto womunatsi nesipo yomusuki.
I TIMOTIO 6:12 Urwe kurwa kwakanaka kwokutenda, ubatisise vupenyu bwusingaperi, bwawakadanirwa kwabwuri, ukapupura kupupura kwakanaka pamberi pazvapupu zvizhinji.
14 Kuti uchengete murairo, usinoruvara, usina chaungapomerwa, kusvika pakuvonekwa kwaShe wedu, Jesu Kristu.
Vatendi vanofanira kurwa chete kurwa kwakanaka kusvikira Ishe achivonekwa. Ipapo vachava mumuviri usingavori, usingabatwe naSatani.
Kana gore raive kuvonekwa kwaShe, zvino kurwa kwekutenda kwakadarika uye hatichafanirwi kurwa. Izvi hazvisirizvo. Tinoda kutenda kukunda zvataimboita. Tinofanira kurwa kusvikira tagamuchira muviri mutsva.
I PETRO 1:7 Kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu, kunokosha zvikuru kupfuvura ndarama inopera hayo, kunyangwe ichiidzwa nomoto, kuwanikwe kuchibereka kurumbidzwa nokubwinya, nokukudzwa pakuvonekwa kwaJesu Kristu.
II TIMOTIO 4:1 Ndinokupupurirai kwazvo naizvozvo pamberi paMwari, naShe Jesu Kristu, iye uchatonga vapenyu navakafa, pakuvonekwa kwake novushe bwake;
2 Paridza shoko; ramba uchidaro nenguva yakafanira, kunyangwe isakafanira; raira, tuka, ranga nomoyo murefu zvikuru mukudzidzisa.
3 Nokuti nguva ichasvika yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi, vachida kufadzwa panzeve dzavo, vachizvivunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo
4 Vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi, vachitsaukira kungano. (kuturikirwa kwemazwi akabatwa pachinzvimbo chekutsigira mazwi akabatwa neMagwaro.)
Kana Mwari vakavonekwa, kutongwa kunenge kwasvika. Achatonga kutenda kwedu neBhaibheri, kwete nemazwi akabatwa paitaura vanhu.
II TIMOTIO 4:8 Kubva Zvino, ndakachengeterwa korona yokururama, yandichapiwa naShe, Mutongi wakarurama, nezuva irero; ndisini ndoga, asi navose vanoda kuvonekwa kwakwe.
56-0304 Kuita Nzira
Kana uchirwara uye waneta nekurarama uku kwese, wova nerudo rwekuvonekwa kwaShe Jesu Kristu kukunda kuda kwako chikafu chiri patafura pako, kana mukadzi wako, kana vana vako, zvino kunova nekorona yawakagadzirirwa, kwete korona, korona yendarama yavanoisa pamusoro pako, asi muviri usingazorwadziwi ne ... yakashongedzwa mukubwinya kwaMwari, kushongedzwa korona mukusavora kwaJesu Kristu. Ndizvo zvawakagadzirirwa, kuti Ishe, mutongi wakarurama, achakupa izvozvo zuva iroro. Ndiro zuva ratakamirira. Mwari vakaita nzira yekubuda nayo kune mumwe nemumwe wedu, chokwadi akaiita.
Korona dzedu dzekururama ndiyo miviri yedu yatichapiwa isingavori. Ndiwo mubairo chaiwo watakarindira.
Tichauwana chete mumashure mekumutswa kwevakafa kana miviri yedu yashandurwa. Kana Mwari achivonekwa, muchawanawo miviri mitsva mokwira kunosangana naye Kudenga.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga kumuka:
Zvinoshamisa, vanotenda Mharidzo vakawanda vanotenda kuti izvi zvese zvakaitika pakaonekwa gore.
Asi paive pasina inzwi sezvo vakafa vasina kumuka. Paive pasina hwamanda yakanzwikwa kuti iudze mwenga kuti asimuke kuenda kudenga. Avo vanotaura izvi vachiri panyika makore anokwana kuita 60 mumashure mezuva iri.
I VAKORINTE 15:52 Pakarepo, nokubwaira kweziso, nehwamanda yekupedzisira; nokuti hwamanda icharira, apo vakafa vachamutswa mukusavora; nesu tichashandurwa.
Tinoshandurwa mumashure mekumutswa kwevakafa, kwete vakafa vasati vamutswa.
Hakuna kuvonekwa kunotora nguva refu. Hakuna kushandurwa kunotora nguva refu. Zvese zvinoitika pakarepo, nokubwaira kweziso.
Mamwe Magwaro anoshandisa “kuuya” mamwe anoshandisa “kuvonekwa” sechinhu chimwechete.
VAHEBERU 9:27 Vuye vanhu zvavakatemerwa kuti vafe kamwechete, kutongeswa kugotevera:
28 Saizvozvo Kristu, wakaitwa chibairo kamwe chete, kuti atakure zvivi zvevanhu vazhinji, uchazovonekwa rwechipiri, asingatakuri zvivi, naivo vanomutarira kuti avaponese.
I PETRO 5:4 Kana Mufudzi mukuru achizovonekwa, muchawana korona yokubwinya isingasvavi.
I JOHANE 2:28 Zvino, vana vaduku, garai maari, kuti, kana achizovoneswa tive nokusatya, tirege kunyadziswa vo pamberi pake pakuuya kwake.
I JOHANE 3:2 Vadikanwa, zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizovoneswa, isu tichafanana naye; nokuti tichamuvona sezvaakaita.
Hakuna mumwe wedu akaita segore. Saka gore kwaive kusiri kuvonekwa kwake.
65-0829 Edeni raSatani
Oh Mwari, kurangarira kuti imwe yenguva, mumwe achaenda kunoshanyira mumwe otorwa. “Vaviri pamubhedha; pachatorwa mumwechete umwe achisara. Vaviri mumunda; achatora mumwechete osiya mumwechete.”
Dai mumwe akasagara pano nhasi akanzwa Mharidzo, dai pakasaita umwe anorasika, kubva pamwanana kusvika pamunhu mukurusa. Dai rudo rwavo rweHutsvene rwava kuna Mwari neShoko rake dzvene. Hatizivi kuti achavonekwa rini.
Raive gore 1965, makore anoda kuita matatu mushure mekuonekwa kwegore. Haana kutaura kuti Ishe akavonekwa segore. Haana kutaura kuti achaonekwa muchivande mune kumwe kuitika kunonoka kuchatora makore 60 kana kudarika.
65-0718E Kudya KweMweya Panguva Yakakwanira
Zvino, kana achivonekwa kwatiri mumuviri, achiratidzika chaizvo chaizvo semusoro waKristu wakanyorwa naHofmann ari nemakore makumi matatu nematatu, ropa richibuda kubva paruvoko rwake, nedzimwe nzvimbo, mavanga ezvipikiri akazara muviri wake, handingazvitambiri. Kwete, kwete, kwete, kwete. Kana akauya, Iye pachake, “Ziso rega rega richamuvona, rurimi rwega rwega ruchapupura; uye pachauya mheni kubva kuMabvazuva ichienda kumadokero, ndizvo zvazvichave.” Mazviona here? Hatitende izvi neizvo. Tinotenda kuti Mwari ndiye Shoko.
Hakuna zvekunzi achavonekwa murenje ari munhu watinoona anoratidzika semufananidzo watinogaroona waKristu wakaitwa naHofmann.
Paachauya zvichazivikanwa nemunhu wese. Hamuzoda mumwe munhu kuti akuudzei.
Tiri kurarama munguva yekuguma nenyasha dzaMwari wekumusoro soro, nerubatsiro rwake, kuvanhu vake kuti vatarisire kuvonekwa kwaKristu nekukasika ... “Zvichatora nguva yakareba sei, hama Branham?” pamwe makore makumi maviri pamwe makumi mashanu, pamwe muzana remakore; handizivi. Uye pamwe mangwanani anouya kana pamwe husiku hwanhasi; handizivi. Uye chero munhu anoti anoziva, anonyepa. Mazviona? Havangazivi. Mwari ega ndiye anoziva.
Apa paive pashure pekuonekwa kwegore. Aive achiri akatarisira kuvonekwa kwaKristu.
63-0804E Jesu Munhandare
Dai Mweya Mutsvene une rudo wavatora, wavatungamirira kurubhabhatidzo rwemvura, uye kurubhapatidzo rweMweya Mutsvene, uye wovasimbisa muHumambo hwaMwari kusvikira pakuuya nekuvonekwa kwemuviri waShe Jesu Kristu kuti atore Mwenga wake. Ndevenyu, Baba. Dai Mwari wemasimba ose wekubwinya kweShekina ava navo zvino nekusingagumi. Muzita raShe Jesu Kristu. Ndanamata. Amen.
63-0825M Ndingakunde sei
Zvino, pakuuya kwaShe Jesu Kristu, avo vari kunyatsoda kuuya kwake, vari kuraramira izvozvo; paachaonekwa kumakore, kereke yakafira munaKristu ichamutswa, neavo vachashandurwa chinguvana.
Tarirai nzira yaakashandisa nayo izwi rekuti “kuvonekwa” richishandurika. Vanoreva chinhu chakafanana pano.
Jesu haasi kuzouya munyika dzegwengawo zvadzo. Kuuya kwake kuchave kumunhu wese.
Imwe nzira inoshandiswa musoro wenyaya uyu ndeyekuti akavonekwa kana kuti akatanga kuvonekwa kwatiri segore guru. Izvi zvinoreva kuti haavonekwe kwatiri nekuti ari mune nzvimbo dzakadzama dzama (dzimba dzemukati), uye kubva ipapo huvepo hwake huri kuvonekwa kakawanda pakati pedu. Bhaibheri rinoti musatende mune izvi.
… Zvino, kuuya kwaKristu kusati kwasvika, Bhaibhri rinoti kuchamuka vanaKristu venhema vachati ndivo vana Kristu, vachati, “Tarirai,” vanhu voti “Ari murenje.” Musatende izvozvo. “Tarirai, Uri mudzimba dzomukati.” Regai kutenda. “Nokuti semheni inobva kumabvazuva ichipenyera kumadokero ndizvo zvichaita kuuya koMwanakomana womunhu.” mazviona? Hongu, achavonekwa, uye chichava chiitiko kumunhu wese.
Izvi zvakaparidzwa mumashure mekutorwa kwemifananidzo yegore pamusoro perenje.
Anoti Kristu achavonekwa munguva inouya uye achavonekwa nemunhu wese.
Kwete mudzimba dzemukati, kwete murenje rakaita seregomo reSunset kwaivhima hama Branham. Tarirai kuti akashandisa sei mazwi aya ose “kuuya” uye “kuvonekwa” ese anoreva chinhu chimwechete.
Dzidziso iyi yakaitwa mumashure mekuvonekwa kwegore. Haana kumbotaura kuti gore raive kuonekwa kwaKristu.
Ari kutaura kuti Kristu achaonekwa, nemunhu wese.
Vanotenda kuMharidzo yenguva yekupedzisira vanokoshesa mazwi akataurwa muna 1962 anoisa musiyano pakati pemazwi ekuti kuvonekwa uye kuuya. Havakwanisi kuenderana nemamwe makore ese paakazoramba achitaura muzviitiko zvakasiyana-siyana kuti kuvonekwa nekuuya chinhu chimwechete.
Parizvino ngatitarisei kuturikirwa kwechitatu kwezwi rekuti “kuvonekwa”. Izvi zvinoyananiswa naMerkizedeki.
Pano musiyano wakaiswa pakati penzwi rekuti “kuvonekwa”uye “Kuuya”. Nei? Jesu aifanira, mukati menguva dzemakereke, kudzokorora nzira yakashandiswa naMerkisedeki kana kuti Merekizedeki paaishanda naAbrahama.
Saka “kuvonekwa” kunoreva hushumiri hwaMerkisedeki hunoitwa naJesu,
Kuvonekwa kwekutanga kwaMerkizedeki kwaive apo paaive Muprista mukuru achisvikotambira chegumi chaAbrahama.
GENESISI 14:18 Merekizedeki, mambo weSaremi, akauya nechingwa newaini; iye wakanga ari Muprista waMwari woKudenga-denga.
19 Akamuropafadza, akati, Abrahama ngaaropafadzwe naMwari wokudenga-denga, muridzi wokudenga napasi.
20 Mwari wokudenga-denga ngaakudzwe, wakapa vavengi venyu mumavoko enyu. Akamupa chegumi chezvose.
Kuvonekwa kwechipiri kwaMerkizedeki kwaive kutsanangurwa kwemifungo yevanhu achitaurira munhu.
GENESISI 18:1 Zvino Jehova wakazviratidza kwaari pamiti yemiouki yeMamure, agere pamusuwo wetende masikati zuva richipisa.
GENESISI 18:9 Ivo vakati kwaari, Sara mukadzi wako, ari kupiko? iye akati, Tarirai, ari mutende.
10 Iye akati, Zvirokwazvo, kana gore rapfuura, ndichauyazve kwamuri, nenguva iyo Sara, mukadzi wako achava nomwanakomana. Zvino Sara akanga achiteerera ari pamusuwo wetende shure kwake.
11 Zvino Abrahama naSara vakanga vakwegura, vava namakore mazhinji; nomutoo wavakadzi wakanga watoguma kunaSara.
12 Sara akaseka mumoyo make akati, ini ndingazvifarira here zvandachembera, naiye tenzi wangu akwegurawo?
13 JEHOVA akati kuna Abrahama, Sara wasekereiko, achiti, Ko ini muchembere ndichabereka mwana zvirokwazvo here?
Ari Merekizedeki, Mwari akataura pfungwa dzakafungwa nemoyo waSara.
Merekizedeki ndiani? Mwari akazvisikira muviri, akagara mauri akauya kaviri panyika kuzosangana naAbrahama.
VAHEBERU 7:1 Nokuti Merekizedeki uyo, mambo weSaremi, muPrista waMwari wokumusoro-soro, wakasongana naAbrahama pakudzoka kwake andovuraya madzimambo, akamuropafadza.
2 Abrahama akamupavo chegumi chezvose; Iye pakutanga ari mambo wokururama, kana zvichishandurwa, vuye zve, mambo weSaremi, ndokuti, mambo werugare.
3 Asinababa, asinamai, asinamadzisekuru, asinakutanga kwamazuva, kana kuguma kwovupenyu, asi wakafananidzwa noMwanakomana waMwari, unogara ari muPrista nokusingaperi.
Asinababa kana mai zvinoreva kuti Mwari akazvisikira muviri akagara mauri. Muviri unovonekwa wakazonyangarika pakadzokera Mwari kudenga.
Hushumiri hwaMerkisedeki uhwu hwakaita nzira yaizoteverwa nenguva dzemakereke.
Tikapinda mukati menhorondo yenguva dzemakereke, panofanira kuva nehushumiri hwaMerkizedeki APO Mwari vanoonekwa nenzira mbiri dzakasiyana mukati menguva dzemakereke. Aizovonekwa semuPrista mukuru Kudenga kuitira kuti zvivi zvedu zviregererwe. Iye oga ndiye anokwanisa kuregerera zvivi.
Munguva yekereke yekupedzisira, Kuuya Kwechipiri kusati kwaitika, aizovonekwa pamberi pevanhu achishandisa izwi remunhu (KWETE mutumwa wechinomwe pachake, asi izwi remutumwa wechinomwe) kuzotaura mifungo yevanhu.
Hushumiri hwehama Branham hwakaziviswa nechiedza chinoshamisa chakavonekwa pamusoro pake muna 1933 pavaibhapatidza murwizi rweOhio.
Hushumiri hwekutaura zvaifunga vanhu hwakaziviswa kuhama Branham nemutumwa muna 1946. Zvakatora nguva kusvikira muna 1965.
Muna 1947 vakava muparidzi wekutanga kutapa mharidzo dzavo pamakaseti.
Muna 1950 Mwari vakavonekwa pamusoro pemusoro wake sechiedza chikatorwa mifananidzo paHouston.
Muna 1963 vatumwa vanomwe vakavapa basa rekuzivisa zvakavanzika zveMwagwaro.
Zvino, “mumazuva enzwi” remutumwa wechinomwe, nguva refu mumashure mekunge iye mutumwa wechinomwe asisipo, dzidziso dzakatapwa dzinofanira kugonesa Mwenga kuti awane zaruriro yeShoko rechokwadi. Mwenga haazovi nechikonzero chekusava akagadzirira Kuuya kwaShe kweChipiri.
Regai titarise hushumiri hwake hwekuporofita zviri mupfungwa dzevanhu.
VAHEBERU 6:17 Saizvozvo Mwari wakati achida zvikuru kuratidza vadyi venhaka yechipikirwa, kuti chirevo chake hachishandurwi, [hurongwa hwake haushandurwi] wakapinda pakati nokupika.
18 Kuti nezvinhu zviviri zvisingashandurwi, (nokuti pazviri Mwari haagoni kureva nhema), tive nesimbiso yakabata, iyesu, takatizira kutariro yakaiswa pamberi pedu, kuti tibate;
19 Yatinayo sechibatiso choMweya, tariro isingazununguswi, yakasimba, inopinda kune zviri mukati mechidzitiro chetembere;
20 Pakapinda mutungamiriri nekuda kwedu, iye Jesu wakaitwa muPrista mukuru nokusingaperi, wegwara reimba yaMerkizedeki.
Mwari saMerkizedeki, akaita zvinhu zviviri zvaasingazoshanduri. Tinogona kusimbisa kutenda kwedu pakuvonekwa kuviri kwaMerkizedeki.
Kuvonekwa kwekutanga kwaMwari saMerkizedeki kwaive hushumiri hwechiPrista:
VAHEBERU 7:1 Nokuti Merekizedeki uyo, mambo weSaremi, muPrista waMwari wokumusoro-soro, wakasongana naAbrahama pakudzoka kwake kundovuraya madzimambo, akamuropafadza;
2 Abrahama akamupa vo chegumi chezvose; iye pakutanga ari mambo wokururama, kana zvichishandurwa, vuye zve, mambo weSaremi, ndokuti, mambo werugare.
3 Asinababa, asinamai, asinamadzisekuru, asina kutanga kwamazuva, kana kuguma kwovupenyu, asi wakafananidzwa noMwanakomana waMwari; unogara ari muPrista nokusingaperi.
VAHEBERU 8:1 Zvino, shoko guru panaizvozvo zvatataura ndiro kuti: tinomuPrista mukuru wakadai wakagara kurudyi rwechigaro chovushe chovumambo kudenga.
Saka Jesu anofanira kuzadzisa hushumiri huviri hwaMerkizedeki.
Chekutanga anofanira kuvonekwa Kudenga, seGwaiana rakabaiwa kuti Ropa rake pachigaro chekutonga chishanduke chive chigaro chenyasha. Apo Mwari achiona Ropa anoregerera zvivi zvedu. Ipapo anobva aita basa remuPrista mukuru zvakare.
VAHEBERU 9:24 Nokuti Kristu haana kupinda panzvimbo tsvene yakaitwa namavoko, inofananidza iyo iri chaiyo, asi wakapinda kudenga kumene, kuti zvino azviise pamberi paMwari nokuda kwedu.
VAHEBERU 8:2 Iye mushumiri wezvinhu zvitsvene, nowetabhernakeri chaiyo, yakamiswa naShe, isina kumiswa nomunhu.
Chikamu chechipiri chehushumiri hwaMerkizedeki:
Zvino Jesu, Mwanakomana akavimbiswa asati auya, anovonekwa panyika pakati pevanhu achishandisa “inzwi remutumwa wechinomwe” remunhu kuvatsanangurira zvavanofunga.
63-0623M Kumira Pamupata
Zvino, mumashure menguva huru yekuuya kwekuponeswa kwevarwere, kudzingwa kwemadhimoni, nekumutswa kwevakafa; zvatinopupura tese, sezvinoita vanachiremba nevanhu vane mbiri vepasi pano. Kuvonekwa kwaShe Jesu pakati pedu, kuti muchiratidzo sezvamuri kuona, ndofunga pachidziro, chero nzvimbo yachiri, kweMutumwa waShe. (Apa maive muna ndira 1950 “haro” mufananidzo wakabva kuHouston kwakavonekwa Kristu) Nekutevedzerwa kwawakaitwa nevesainzi, uye chi-chinhu chinozivikanwa pasi rese.
64-0404 Jehova Jireh, Chikamu 3
Abrahama, tarirai nzira paanouya, anoratidza rudzi rwekereke. Zvese zvakaitwa naAbrahama, zvaka ... Takatarira kereke. Dai taive nevhiki kana maviri pano, tiri pano, ndaikuratidzai, nhanho nenhanho. Kereke yakaita nzira imwechete iyi. Chiratidzo chekupedzisira aive Mwari, Shoko rakavimbiswa richitaura kwaari, munyama yemunhu. Chivimbiso chekupedzisira nyika yevaHedeni isati yaparadzwa, yaive Sodoma neGomorra. Zvino fungai, Abrahama, asati, aive .... Mwari vakavonekwa kwaari muzviratidzo zvizhinji, nezviyedza, nendudzi, nezviratidzo, asi Mwari haana kubvira auya kwaari semunhu achitaura nenzwi rinonzwika semunhu, kubva mumunhu. Uye rangarirai, chivimbiso chagadzirira kuti chizadziswe, Sodoma ichapiswa, Mharidzo yekupedzsira yatanga.
Mwari vachishandisa izwi remunhu rinonzwikwa.
Asi mutumwa wechinomwe haasi Mwanakomana wemunhu. William Branham haasi Jesu Kristu.
65-0725M Vakazodzwa Panguva Yekupedzisira
Zvino, ndinoda kuziva kuti ichi ichokwadi, uye imi makateerera kukaseti iri. Munodaro mafunga nhasi kuti ndanga ndichiedza kutaura izvi pamusoro pangu, nekuti ndanga ndichirongedza Mharidzo iyi. Handisisina chekuita nazvo kupinda kusaita chiro, hapana asi inzwi. Uye, izwi rangu, kunyangwe ndichipikisa kutongwa kwangu kuri nani; ndaida kuva mutapi. Asi hurongwa hwaBaba vangu kuti ndinoita izvi, uye ndinoda kuzviita.
Handisini ndakaonekwa parwizi; ndaive ndakangomirapo paakavonekwa. Handisini ndinoita zvinhu izvi uye kufanotaura zvinhu zvichaitika sezvazviri; ndingoriwo munhu ari pedo paanozviita. Ndaingove inzwi raaishandisa, kuti azvitaure. Zvaive zvisiri zvandaiziva; ndezvandakangozviwisira kwazviri, kuti ataure kupfurikidza ini. Handizini, aive asiri mutumwa wechinomwe, oh, kwete; kwaive kuzviratidza kweMwanakomana wemunhu. Aive asiri mutumwa, imharidzo yake; chaive chakavanzika chaiziviswa naMwari. Haasi munhu; ndiMwari. Mutumwa aive asiri Mwanakomana wemunhu; aive nhume kubva kuMwanakomana wemunhu.
Saka Mweya Mutsvene muna Ndira 1950 paHouston wakatorwa mufananidzo pawakavonekwa pamusoro pehama Branham uchiratidza kuti Mwari aive pedyo naye. Kuzara kwovuMwari kwaive kusiri maari, nekuti aizova Mwari.
Uyu mufananidzo weHouston “haro”.
Chiedza aive Mwari aionekwa pakati pedu. Mwari vanoziva zvinofungwa nevanhu voshandisa izwi rehama Branham kuti vataure nevanhu. Hama Branham pachavo kazhinji vaisaziva kuti Mwari vataura kuti kudii kupfurikidza ivo.
Vakawanda vanotenda kuMharidzo vakarasikirwa nemuono uyu vakasimudzira William Bhranham. Uku kukanganisa kukuru. Haakwanisi kuva akadarika mutumwa wechinomwe muruoko rwerudyi rwaJesu rwakaonekwa naJohane kuna Zvakazarurwa Chaputa 1.
64-0412 Kutongwa Mudare
Baba vedu veKudenga, kufunganya kwenguva ino, tiri kudzungaira, Ishe, kuti vanganiko vanotenda pachokwadi. Mbeu yakushwa. Shoko raverengwa. Kristu, Mudzimu unoyera, avonekwa pamberi pedu akaratidza kuti Hupenyu hwanga huri Muchiedza, uye ndiye Chiedza chenyika, Ndiye Chiedza parizvino. Ndiye Chiedza chikuru chisingaperi, uye avonekwa pamberi pedu, masikati ano, akaita zvaakavimbisa kuti achaita munguva ino. Shoko rataurwa zvakazara. Shoko raziviswa zvakakwana. Dai vanhu, parizvino, vakatenda zvakakwana muShoko iri nemoyo yavo yese.
63-0604 Jesu Kristu haashanduke Zuro Nhasi Nekusingaperi
Sara, mutende kumashure kwake, Bhaibheri rinodaro, “aive shure kwake, mutende. Akaseka ari oga.”
Chaive chiratidzo chei? Jesu akatii? “sezvazvaive mumazuva aRoti, ndizvo zvichaita kuvuya kwoMwanakomana womunhu.” Ndizvo, ndizvo...
Mumwe munhu wakati kwandiri, “Hama Branham, hamutendi kuti aive Mwari, ndizvo here?” Bhaibheri rinoti aive Mwari, ndizvo zvega zvandinoziva. Akati aive Mwari.
Chaive chiratidzo chei? Kuti, Mwari, mumazuva ekupedzisira, nyika isati yaparadzwa, achavonekwa kuungano yakadanwa, Mwari achizvizivisa mumuviri wemunhu pakati pevanhu vake. Apa angori mumwechete asingashanduke zuro, nhasi nekusingaperi.
64-0415 Kristu Anozivikanwa Ari Mumwe Munguva Dzemazera Ose
Ndinoda kukubvunzai mubvunzo. Ndoda kuti munditarise. Rangarirai, nekusimba kwazvakaita pazvinotaurwa neMagwaro, Abrahama haana kubvira aona chimwe chiratidzo kusvikira mwanakomana avapo. Ndicho chiratidzo chekuguma chakaonekwa naAbrahama. Kunogara kuine chiratidzo. Regai ndikutaurirei, Kereke, ichi ndicho chenyu chekupedzisira. Kuvonekwa kweMwanakomana kwava pedo kuuya. (Yaive yatove nguva refu mumashure mekuvonekwa kwegore) “Panguva yamusingafungiri, tichakwira kudenga.” Vanhu vacharamba vachiparidza, vachifunga kuti vari kuponeswa, nezvimwe zvese. Achave ... Sezvazvaive pakasvika Johane, vese, vakaenderera, vachidarikira nguva chaiyo nguva yapera kukunda zvatinofunga.
Zvisinei nekuti Mwari Ari kuvonekwa mumisangano achitaura zviri kufungirwa nevanhu, hama Branham achiri akatarisira kuvonekwa kwaKristu.
Saka kunyangwe Mwari vakaonekwa mumisangano kuti vataure zvaive mupfungwa dzevanhu, zvaiitika kubva muna 1946, Hama Branham vaive vachiri kuziva kuti kuuya kwaKristu ndiko zvakare kuvonekwa kwaShe.
62-0728 Mwari Vane Nzira Yakapiwa
… Asi yakadarika nepauri, ukasaiziva. Kunyangwe vadzidzi vakati, “Nei vanyori vachiti Eria anofanira kutanga kuvuya?”
Akati, “Eria wakatouya asi hamuna kumuziva.” anopfuura nepamusoro penyu asi hamuzvizivi. Musapotsana naye. Mweya Mutsvene, Kristu ava pano.
Zvino, rangarirai mashoko maviri aya ndisati ndabva kwamuri: kuvonekwa kwaKristu nekuuya kwaKristu zvinhu zviviri zvakasiyana. Kristu ari kuvonekwa mukuzara kwesimba rake rose. Kuuya kwake kuri kutevera: Kuvonekwa kwake asati auya. Mwari tinzwirei tsitsi.
1962 Apa gore raive risati ravonekwa. Mwari aivonekwa mukuzara kwesimba ravo.
1962 Ndiro rega gore raisimbisa hama Branham musiyano wekuvonekwa nekuuya kwaKristu.
1962 asati asvika uye mumashure ma 1962 aishandisa izwi rekuti “kuvonekwa” nerekuti “kuuya” achishandidzana.
…Zvino, baba vedu vakavimbisa, vanhu varindira masikati ano. Ava vari muno, vakateerera nekuti vane chinangwa. Vauya kuzotsvaga tsitsi dzenyu. Makaonekwa pamberi pedu pakuonekwa kukuru, mukaratidza kuti muchiri Jesu uye kuti muri pano.
Iri igore 1962. Gore risati ravonekwa. Jesu aivonekwa pakati pavo.
Asi chiedza chinoshamisa chaionekwa pakati pavo makore aive adarika muna 1950.
50-0713 Teererai Inzwi reMutumwa
Asi nguva yakadarika chakaonekwa tave kuda kubuda... ndinogara ndichishanda. Ndakava mufundisi wekereke duku yeBaptisti paJeffersonville, ichiriko nanhasi. Handina kubvira ndakatora chipo ipapo. Handina kubvira ndakatora chipo, muhupenyu hwangu hwese. Handitende mazviri... Ndaikwanisa kuzvishandira, ndaitadziswa nei kushanda. Ndaive gemu wadheni weIndiana state .
Rimwe zuva ndichibva kunotenderera, ndakasangana ne... nzvimbo yangu, ndainamata husiko ihohwo kuma 1 dzekunze kwoyedza pakati pa 1 na 3 kwakuyedza. Ndakaona mukamuri yangu, chiedza chichizadza pasi pese. Ndikashaiwa kuti chaive chabva kupi. Ndakatarisa mudenga, chiedza chimwechete ichocho chakamboonekwa mumusangano. Ra...
Chiedza chimwechete ichocho chakavonekwa. Mwari vakaramba vachivonekwa muhushumiri hwake.
Aigara achitaura pamusoro pemufananidzo wemuna 1950 weHouston “haro”, wakazokopwa, uye chiedza chaionekwa pamusoro pemusoro wake muna 1933 paaibhapatidza munhu wechigumi nenomwe murwizi rweOhio sekuvonekwa kwaKristu.
Paakavonekwa murwizi makore makumi matatu nematatu adarika.
Uku ndiko kuchava kumwe kwekuratidzira kwenguva yangu. Chimwe chinhu chichaitika pakati pemusangano uno chichava chinhu chikuru chisina akambochiona. [Apa gore raive ratoonekwa] dzaive nguva dzesere kana dzepfumbamwe husiku gumi mumashure mekuvonekwa kweMutumwa waShe pamberi pevanhu vanogona kusvika zviuru makumi matatu, akaburuka, mifananidzo ikatorwa; uyo uri apo izvozvi, wakakopwazve muWashington, DC semunhu mumwechete anoshamisa akambotorwa mifananidzo pasi rese.
Chinhu chikuru chaive chekuti zvaaiparidza zvaibva muMagwaro. Ndicho chaive chinhu chakanakisa.
Nekushandisa izwi rehama Branham paAitaura zvaifungwa nevanhu mupfungwa dzavo, Mwari vakazadzisa chikamu chechipiri chehushumiri hwaMerkizedeki. Hushumiri uhu hwakatanga muna 1946 pakauya vatumwa kune hama Branham akamutangira hushumiri hwake hunoshamisa.
Mwari ndiye aiita izvi paive nehama Branham. Mwari vakavonekwa pahuvepo hwehama Branham kuti vaite zvishamiso mukuporesa nekutaura mifungo yevanhu.
VeMharidzo yenguva yekuguma vanoti “kuvonekwa kwaKristu”kushandurwa kunoshamisa kwemiviri yavo kwakatanga pakavonekwa gore muna 1963
(Vanotenda kuMharidzo vakawanda vanoti Kristu akauya muna 1963 segore, murenje rine gomo reSunset, voenderera mberi vachiti aizouya muna 1970, muna 1973 nehafu, nemuna 1977. Zuva racho rakaramba richishandurwa. Vamwe vakatomboti gore ra 2000. avo vakaisa kuuya kwaShe muna 1977 (kunyangwe vave kuzviramba nhasi uno) vakaenderera mberi nekusvibisa mvura nekutaura kuti Ishe vakavonekwa segore muna 1963 (vakanyengera pamusoro wenyaya uyu nekushandura kuuya kwake kuti kuve kuvonekwa kwake). Vanoti ari mune nzvimbo dzakadzama dzakavanzika (dzimba dzomukati) achiramba achionekwa kakawanda sekunge miviri yavo iri kushandurwa zviri kutora nguva refu. Izvi zvese hazvishande kune avo vakafa kusvika parizvino.
Kana Ishe vakavonekwa kakawanda, zviratidzo zvinoshamisa zvinofanira kuwedzerawo. Zvinosuwisa, zviratidzo zvinoshamisa zviri kutoita zvishoma pane kuti zviwedzere. Mushumiri wekuNigeria akasimudzirwa achinzi ane hushumiri hukuru kupinda hama Branham asi tsaona yakaitika yekudonha kwechivakwa chaive chisina kana nheyo dzakakwanira uye purani kwakauraya vanhu vanodarika churu vevateveri vake. Saka munokwanisa kumutevera nekuda kwenyu musazopomerana kana paine chaitika.
Nekuda kwedzidziso dzakasiyana-siyana pamusoro pegore guru dzinokanganisa nekuita vanhu marema, Jesu akatiyambira kuti haazovonekwe kurenje kana kuti kuvapo zvakavanzika (kana Parousia) mune nzvimbo dzakavanzwa (dzimba dzemukati).
Zvakadaro, hama Branham havana kubvira vashandisa izwi rekuti “Parousia”.
MATEO 24:24 Nokuti vachamuka vanaKristu venhema, navaporofita venhema, vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira, vatsause vatsvene navakasanangurwa vo.
25 Tarirai ndagara ndakuvudzai.
26 Zvino, kana vakati kwamuri: Tarirai uri kurenje, regai kubuda, tarirai uri mudzimba dzomukati, regai kutenda.
27 Nokuti semheni inobva mabvazuva, ichipenyera kumavirira, ndizvo zvichaita kuuya kwoMwanakomana womunhu.
Gore rakaenda nerumwe rutivi, kubva kumavirira richienda kumabvazuva.
Ndeipi nzira iri nyore kune vakadanwa, imi neni, kuti tinyengerwe? Nekutenda kuti Mwari akauya neumwe mutoo murenje. Gore rakatorwa mifananidzo riri pamusoro penzvimbo dzerenje. Saka musatende kuti kwaive kuuya kwaShe kwepiri, kana kuti kuuya kwaJesu kuna Zvakazarurwa 10 seMutumwa mukuru wesungano, anomiririrwa nemurarabungu pamusoro wake.
Gore rakavonekwa sechiratidzo kwatiri tese, kuti tichatongwa neShoko. Ndicho chikonzero nei hama Branham vaive vasipo uye vasina kuziva chiro paraitorwa mifananidzo.
Asi Mwari aizomushandisa kuzivisa Shoko. Saka tinofanira kudzidza Magwaro kubva padzidziso dzake nekuti pekupedzisira tichatongwa neBhaibheri.
Zvatinoita zvekudzosera dzidziso dzake kuBhaibheri ndizvo zvichadiwa kwatiri naMwari.
Bhaibheri rinoti tinofanira kuriziva kuitira kuti tigone kunzwisisa zvakavanzika zviri muMagwaro zvatinoda kuziva kuti tigadzirire Kuuya kwaShe kweChipiri.
Ngatitarisei kuti tingave nechokwadi sei.
Kana ukangotevedzera mazwi akataurwa, uchaitei nenyaya mbiri dzawakabata dzichitaurwa dzinorwisana?
61-0101 Zvakazarurwa Chaputa 4 Part 2
Zvino, munhu chii? Munhu wenyama; muviri, mweya wevupenyu nemweya.
65-1126 Mabasa Anosimbiswa neKutenda
Uri: muviri, mweya, nemweya mupenyu.
Kuzvironga zvakanaka ndekupi? Muviri, mweya wevupenyu nemweya kana kuti Muviri mweya nemweya wevupenyu?
Hama Branham vakataura izvi zvese, saka imi munomanikidzwa kudzokera kuMagwaro kunotarisa kuti ndezvipi zvakataurwa zvechokwadi zvinoenderana nemavhesi akawanda emuBhaibheri panyaya iyi. Munokwanisa kutsigira nemamwe Magwaro here kuti zvakataurwa pechipiri ndezvechokwadi? Vanonyatsotenda kuMharidzo yenguva yekupedzisira vanokudairai kuti “tichizvinetserei” kana kuti “hazvina musiyano”. Rudzi rwemhinduro dzakadai harururamisiri kusaziva kwedu Magwaro. Hatizivi kuti tingawana sei mhinduro yechokwadi kubva muMagwaro. Hazvishamisi kuti nei tichitsanangurwa sekunzi hatipisi kana kutonhora.
Asi mhinduro yakadai haizogutse mutongi mukuru. Mutumwa wechinomwe aivepo kuti azivise zvakavanzika zveShoko raMwari. Saka nei tisingade kuzivi Magwaro?
Tarisai mharidzo yehama Branham pamharidzo inonzi “Mbeu yemhuka yakashandurwa kuita Nyoka” yaive yakanakisa, uye yakajekesa kubuda pachena kwechivi chekutanga. Kereke inohwanda kubva padzidziso iyi. Mharidzo iyi itsvagurudzo yakanakisa yekutadza muEdeni. Asi, pedyo pedyo nemavambo, hama Branham vakaita kukanganisa kukuru kunokwana kana papeji rimwechete.
Tarirai ndima inotevera muchaona kuti pane mitsara mina inoda kugadziriswa. Izvi zvinofanira kukuitai kuti mungwarire kuti hazvisi zvese zvamunobata panotaura munhu ane mbiri zvechokwadi. Tinofanira kutarisisa zvaanotaura.
58-0928E Mbeu yemhuka yakashandurwa kuita Nyoka
Kereke yekutanga yemasangano... Tamboitarisa masikati ano “muMadzibaba eNicene”, nhorondo yekereke yeNicene. Mumashure merufu rwemapositora, kwakauya madzibaba eNicene, vakaenderera kwemakore mazhinji (makore mazana matatu nemakumi maviri nemashanu) vakapedzisira vasvika kuNecaea, France, kwavakaita kanzuru yeNicene huru kwazvo. Ikoko vakaita mirairo ine Kereke yeCatholic nhasi uno, yakazoendawo mumasangano akabuda mairi.
[Akati Necaea yaive kuFrance asi pane imwe nzvimbo akati iri kuRoma]
61-0806 Svondo rechimakumi manomwe raDanieri
Iyi yaive Roma, yeNecaea, kwavakaita kanzuru yeNicene.
[Necaea yaive kuAsia Minor, kumaodzanyemba kweConstantinople kuchamhembe kwePergamum kana kuti Pegamosi. Nhasi uno yave Iznik muTurkey. Nicaea yaive isiri muFrance kana kuti muguta reRoma. Zvisinei yaive chikamu chehushe hweRoma panguva iyoyo.]
Sekutaura kwandamboita mudzidziso magwanani ano, imwe neimwe yenguva dzemakereke aya kusvika panguva yekereke yeTesaronika, [hakuna nguva yekereke iyi, yaive nguva yekereke yeTiyatira]
Gore rechi 1500 renguva dzerima, [Kwete. Kwaive nemakore angangoite 900 eNguva yeRima yakaita kubva muna 600 AD kusvika muna 1500 AD. Nguva yekereke yechina, Tyatira, dzaive nguva dzepakati dzenguva dzemakereke manomwe. Nguva yeRima inodaidzwawo kunzi Nguva dzepakati (Middle Ages).]
Hakuna kumbova kana nenguva imwechete asi zvaakataura, “Muchiri nezita rangu.” Kune rimwe rutivi urwu, vaive vasiri muna Kristu zvachose vaibuda muzita resangano: Catholic, Luther, Wesley, Baptisti, Presbeterio, Pentcositi, nemamwe akadaro. Asi nguva iyi yave kuda kunopera Akati, “Ndaisa pamberi penyu musuwo wakazarurwa.” mazviona? Iyi ndiyo nguva yatinotenda kuti tiri kurarama nhasi uno, nguva yemusuwo wakazarurwa, pakati pekuda kunopera kwenguva yekereke yeRaodikia.
Uye pane makore akazara anosvika mazana matatu nemakumi maviri nemashanu kusvika pakanzuru yeRaodikia.
(muna 325 AD yaive kanzuru yeNicaean. Vakatanga dzidziso yeTiriniti vakatambira kuzvisaganisa kwekereke munezvematongerwo enyika. Mbeu yehayibhuridhi yezvematongerwo enyika nekereke yakaberekwa.
Kanzuru yeRaodikia yaive sinodhi yerijeni nhengo dzinosvika makumi matatu dzaibva kuAsia Minor dzaisangana munana 363-364 AD muRaodikia. Vakabvumirana kusiya bhuku raZvakazarurwa kuti rive risiri muBhaibheri uye kushandura zuva reSabata kubva paMugovera kuenda paSvondo.)
Pano tinowana kukanganisa kuna papeji rimwechete. Saka hamukwanisi kungobata mazwi ehama Branham. Munofanira kuzotarisa zvakakosha moziva zvamunenge muchitaura nezvazvo. Kurumbidza nekusimudzira William Branham haisiyo kiyi yekuenda kudenga. Tinofanira kudzokera nemazwi ake kuMagwaro tomatsigira neMagwaro. Kumagumo tinotenda dzidziso, kwete nekuti William Branham akataura izvozvo, asi nekuti takakwanisa kuwana zvaakataura kubva muBhaibheri.
ZVAKAZARURWA 10:7 “Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe ....”
Kwete “nemazuva emutumwa wechinomwe”. Willim Branham, munhu, haasi chinhu chakakosha. Akafa muna 1965.
Asi “nemazuva enzwi remutumwa wechinomwe” izwi rake ragara kwemakore mazhinji pamakaseti nemabhuku. Zvishoma nezvishoma tese tinofanirwa kuswatanudzwa mumazuva iwaya apo dzidziso dzake dziri pamakaseti dzichiri kuwanikwa, nguva refu mushure mekunge afa. Kudzidzisa kwake kwaive kwakanangana nekuti kutidzosere kuMagwaro kuitira kuti titsigire kutenda kwedu neBhaibheri. Mwari akatipa nguva yakawandisa kuti tirarame maererano neBhaibheri saka nekudaro tidzokere kudzidziso dzekutanga dzemapositora madzibaba akanyora Bhaibheri.
“…Zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa.”
Kwete “zvino” zvinoreva kuti zinotoitika ipapo, asi “zvicha” inoreva kuti pane kukakavara pazviri.
Tine dzidziso dzakakwana kubva kune hama Branham kuti tigone kurarama nedzidziso maererano neBhaibheri. Asi Shoko rekuti “zvicha” rinomiririra kuti tinokwanisa kukanganisa zvikuru nekuva nedzidziso dzinobva pamashoko akataurwa nekuturikirwa kwezvakataurwa, pachinzvimbo cheMagwaro. Tichiwedzera tinorasa mikana yedu nekutevedzera tsika dzemasangano nehutungamiriri hwevanhu pakereke.
Kana munhu akaita musoro mukereke, Kristu haasisiri Musoro wekereke iyoyo.
VAEFESO 5:23 Nokuti murume musoro wemukadzi, saKristu vo musoro wekereke: Iye amene ndiye muponesi womuviri.
Izwi rekuti mufudzi “pasita” (mufundisi) rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva.
Kuita pasita musoro wekereke hakuna nheyo dzeMagwaro uye haisiriyo nzira yakashandiswa nekereke yekutanga yatiri kufanira kufanana nayo isu.
61-0208 Madzibaba, Tichaona Jesu
Pasita wenyu nezvimwe zvakadaro vakaneta kukunda mvura yemudhishi. I ... Kereke chava chitambi chavo chekuwana kudya pachinzvimbo chekuva purupeti yekudzidzisa Bhaibheri. Ndizvo ka.
Zvikurusei, tinotenda hutungamiri hwevanhu nekukoshesa kwavo kuwana mari, uye pfungwa dzevanhu dziri kuonekwa sedzidziso mukereke, vanotenda kuMharidzo vaparadzana kuva masangano mazhinji. Masangano ese asingabvumirane aya haangave ane chokwadi ese. Saka vakawanda vanozviti vanotenda kuMharidzo vachapotsana nechinhinhu chikuru. Nguva yeKutambudzika kukuru yakaitirwa kuti ivamutse kubva pakufunga kwavo nekuita kwavo kwakarara.
Nanho yawava pakugona kutsigira kutenda kwako neBhaibheri ndicho chiratidzo chekuti zvakavanzika zvaMwari zvakakunda sei pakuziviswa kwauri. Izvi zvega zvinoratidza kuti hushumiri hwehama Branham hwakabata zvakaita sei muhupenyu hwako.
Munofanira kugona kutsigira kutenda kwenyu neBhaibheri. Munozvigona here?
Musi wa 28 Kukadzi 1963 vatumwa vanomwe vakaita gore rinoshamisa mudenga richiburitsa mufananidzo wemusoro waKristu sechiratidzo kudenga chekuti Mwari vaizoita chinhu chakanakisa.
Hama Branham vaive vasipo pazasi pegore iri izvi zvinoreva kuti mutongi akatarisa pasi patiri, kwete William, sekuti aiti “kutenda kweyu kunobva muShoko here?”
Vhiki rakazotevera vatumwa vaizogonesa hama Branham kuti vazivise zvakavanzika zveMagwaro. Zvino tinofanira kutora zaruriro yake toidzosera kuMagwaro. Kana tikagona kutsigira kutenda kwedu neBhaibheri ndipo patinozokwanisa kutarisana neMutongi. Tinofanira kuzogona kuzvirwira neMagwaro. Zvino ipapo tinenge tagona kururamisira hushumiri hwehama Branham.
20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza; kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharayira naye, naiye neni.
Mwari haafadzwi nemakereke edu nekuti Iye, Shoko, ari kunze. Mukati mune vanhu vakabatirira pamazwi avakabata paitaurwa nekuturikirwa kwemazwi akataurwa. Nei? Nungo. Zvinotora kushingirira kukuru kuti tiverenge Bhaibheri toronda Magwaro akasiyana anodiwa kuti titsigire dziziso yega yega. Zvakare, hamuzova nembiri kuvaparidzi vanoparidza mazwi akataurwa nevatauri vane mbiri.
MATEO 18:19 Ndinoti kwamuri zve, kana vaviri venyu vakatenderana panyika pamusoro pechimwe chinhu chavanokumbira, vachachiitirwa naBaba vangu vari kumusoro kudenga.
20 Nokuti apo pakavungana vaviri kana vatatu muzita rangu, ndiripo pakati pavo.
Zvinoshamisa, masangano maduku anosanganirana mudzimba anoratidza kuti ari kutaurwa zvakanaka pamusoro pawo. Pane kutariswa kwemunhu mumwe nemumwe. Mukana mukuru wekutaurirana uye kukura pamweya. Kwete kungogara, uchinzwa nekukanganwa.
VAROMA 16:3 Ndikwazisirei Priska naAkwira, vanobata neni munaKristu Jesu.
5 Ndikwazisireiwo kereke iri paimba yavo.
VAKOROSE 4:15 Ndikwazisireiwo hama dziri Raodikia, naNimfa, nekereke iri mumba mavo.
Pauro aikoshesa kereke inosanganirana mumba paRaodikia. Tiri munguva yeRaodikia saka tinofanira kudzokera kuhwaro hwekereke yeTestamente Itsva. Hakuna hutungamiriri hwemweya huri nani kukunda hwaPauro.
Mazwi akabatwa paitaura vanhu kana vaparidzi anokwanisa kutipa dzidziso yakafa. Kuturikira mazwi akataurwa kunosiya nzira yakakwana yekudhonzerana kwepfungwa kunotendera kunyengereka kupinda mukutenda kutsva, zvichienderana nekuti ndeapi mazwi akabatwa akosheswa uye ndeapi asina kutariswa.
Kuparidza kubva pamazwi akabatwa vanhu vachitaura kunobva kwava kuturikira mazwi iwayo. Semuenzaniso hama Branham havana kubvira vataura kuti “Kutinhira kunomwe kwakareva”. Vanomutevera vega ndivo vanodaro.
63-0317M Mwari akazvivanza zvakareruka, Zvino Ozvizivisa neNzira Imwe iyi
Saka nguva zhinji, nekurasika, vanhu vanosimuka voti, “Zvakanaka, nhingi na nhingi vakati zvinoreva zvakati nezvakati.” Ngatingozvisiyei zviri zvazviri.
Tarirai, ndiyo nzira yatinoda Bhaibheri. Nenzira yazvinorehwa nayo neBhaibheri, ndiyo nzira yatinozvida, saizvozvo. Regai kuisa zvenyu- musaturikire kwariri.